That's so good, right?: 2010
My Friend and the Jacuzzi
ကျွန်တော်နှင့်ထွန်းထွန်းက အထက်တန်းကျောင်းကတည်းက သိခဲ့ခင်မင်ခဲ့ကြတာပါ။
ကျွန်တော်က gay ဖြစ်ပြီးသူက straight ဖြစ်တာ ကို နှစ်ယောက်
သားသိပြီးပါပြီ။ သူလက်ထပ်ပြီးချိန်ထိလည်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ
အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဇနီး အိချိုက လည်း
အပြင်ကို ညစာထွက်စားကြတာ၊ ရုပ်ရှင် သွားကြည့်ကြတာ၊ တစ်ယောက်အိမ်မှာ
တစ်ယောက် အလှည့်ကျလိုကို အသင်းကင်လုပ်စား၊ ဘီယာအ၀သောက်ကြတာတွေကို သုံး
ယောက်သား တတွဲတွဲ သွားလာသောက်စားလုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့
အမြဲတမ်းသုံးယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာဆိုတော့ အိချိုက ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်
ထားကောင်းပြီး နှစ်လိုဖွယ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်နိုင်ခဲ့ရင်
စုံတွဲနှစ်တွဲအဖြစ်ပျော်ရွှင် ရ မယ်တဲ့။ ကျွန်တော်နှင့် ထွန်းထွန်း
နှစ်ယောက်သား အကြည့်ခြင်းဆုံပြီး ပြုံးမိကြပါတယ် အဲဒီစကားကြားရတော့။
သူနှင့်ကျွန်တော် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး
နည်းနည်းအရှုပ်အထွေးရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြင်းအထန်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်
အခန်းက လွတ်လပ်တာ ဆိုတော့ စာလာကျက်ရင်း လူကြီးတွေ အိပ်ပျော်သွားချိန်မှာ
အပြာကားကို ခိုးကြည့်ကြရင်း အတူတူ -ွင်းထုခဲ့ကြ တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ
လက်ကစားကြတာပါ။ အဲဒီ့စည်းထက်တော့ ကျွန်တော်တို့ မကျော်လွှားခဲ့ကြပါဘူး။
သူ့ဘက်က စည်းကျော်ခဲ့ရင် တော့?? ထွန်းထွန်း အရပ် က ၅ပေ၈လက်မရှိပြီး
သူ့ဆံပင်တွေက နဂိုသဘာဝအကွေးအကောက်တွေနှင့်ပါ။ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ခန္ဓာ
ကိုယ်နှင့် နှစ်လိုဖွယ် မျက်နှာ ပိုင်ရှင်လေးပေါ့။
ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက် တက္ကသိုလ်မတူ တခြားစီတက်ရကတည်းက သူ့ညီဘွား
ခေါင်းထောင်တာကို မမြင်ဖူး တော့ပါဘူး။
အိချို အလုပ်သဘာဝအရ ခရီးတွေထွက်ရတဲ့အခါ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် သူ့အိမ်မှာ
တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေရစ်တတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုးအရင် ကျွန်တော့်မိဘအိမ်မှာ
နေနေတုန်းကတော့ သူ့ကိုလှမ်းခေါ် မာမီချက်ကျွေးတဲ့ အစားအစာတွေ အတူစား၊
အပြင်သွား ရုပ်ရှင် ကြည့်ပေါ့။ သွားချင်တဲ့နေရာ အတူတူသွားဖြစ်ကြတာလေ။
အခုကျွန်တော်တို့မြို့မှာ အဆင့်မြင့် condo တွေဆောက်လုပ်လာရာမှာ Jacuzzi
ပါထည့် သွင်းပေးတာကြောင့် အတော် good ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်နေတဲ့
'ရွှေတိမ်ဖြူ' မှာ Jacuzzi ပါတယ်။
အခုလည်း အိချိုတစ်ယောက် ထိုင်းကို သင်တန်းသွားတက်ရတာကြောင့်
ထုံးစံအတိုင်း ထွန်းထွန်းတစ်ယောက်တည်း။ ဒီနေ့ သောကြာ နေ့ညဆိုတော့
အလုပ်ပြီးရင် ဘာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလဲလို့ သူ့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး
မေးလိုက်တယ်။ သူကမရှိဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော့်အခန်း ကိုလာပြီးရင်
အသားကင်နှင့် ဘီယာကိုဝိုက်ပြီး Jacuzzi ၀င်ကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါရဲ့။
သူကမေးတယ် သူလာရင် ရေကူးဘောင်းဘီ တို တစ်ထည်ယူခဲ့ရမှာလား Jacuzzi
အတွက်တဲ့။ ကျွန်တော်နှင့်သူပဲ စိမ်မှာဆိုတော့
မရှိလည်းရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ အရင် အချိန်....ဟိုးအရင်
ကအချိန်တစ်ခုကိုပြန်လည် ပိုင်ဆိုင်ရမည်လားမသိ။ ကျွန်တော်ဘာတွေ
အစီအစဉ်တွေချလုပ်ဆောင်ဖြစ်နေမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မရိပ်မိခဲ့ သေးပါ။
ကျွန်တော် သူ့ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းဖို့ ကြိုးစားဖြစ်တော့မယ်....။
သူမလာခင် အလုပ်က ကျွန်တော်ပြန်လာပြီး ရေအသေအချာချိုးရင်း ညီဘွားက
ခေါင်းထောင်ထလာပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် လက်ကစားဖို့ အာရုံမရောက်ဘဲ
သူ့ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းဖို့ အစီအစဉ်တွေ စိတ်ကူးထဲက
ထွန်းထွန်းရောက်လာတော့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ အသားတွေသီထားတဲ့
အတံတွေကို မီးကင်လိုက်ရင်း ဘီယာသောက်ကြပါ တယ်။ ညစာ စားသောက်ကြပြီးနောက်
သူရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားကာ အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဗလာနှင့် ပြန်ထွက်လာပါရော။
'Jacuzzi ၀င်ဖို့ အချိန်တန်ပြီလား?'
နှစ်ယောက်သား အခန်းရဲ့ နောက်ဘက် ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီ ရွေ့လာကြရင်း ထွန်းထွန်း
Jacuzzi ထဲတက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ ရဲ့ နောက်ပါးကလိုက်ကာ
တင်းရင်းချောမွေ့နေတဲ့ သူ့တင်သားတွေပြီးတော့ ရွှေဥ၀ိုင်းဝိုင်းတွေပေါ်
တွဲလွဲခိုနေတဲ့ ငပဲပျော့ပျော့တို့ကို ငေးရင်းလိုက်ဝင်ခဲ့တာ။
ကျွန်တော်လည်း အ၀တ်တွေအားလုံးချွတ်။ Jacuzzi ရဲ့
ရေပူတွေပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ထဲ မစိမ်ခင် ကျွန်တော့် ညီဘွား
ကျွန်တော် ကျောမှီထိုင်တဲ့ နေရာမှာထိုင်တော့ သူလည်းအလားတူ။ ကျွန်တော်တို့
ပူနွေးနေတဲ့ ရေပူနှင့် ရေပူပေါင်းတွေကြောင့် ပျော်ရွှင် မိကြသလို
ကျွန်တော့်အနေနှင့် လေထုထဲမှာ လိင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်အချို့
ရှူရှိုက်ရမိသလိုပါပဲ။ ထွန်းထွန်း ကျွန်တော့်ကို
ခပ်ငေးငေးကြည့်ရင်းပြောတာက 'မင်းသိလား၊ ဒီနေ့မင်းခေါ်တာ အရမ်းပျော်သွားတာ။
ငါတို့အတူတူ မကြာခဏဆုံရင် ကောင်းမယ် လို့တွေးနေခဲ့တာလေ' ပါတဲ့။
ချီတုံချတုံနှင့် စကားမဆက်ဘဲနေပြီးမှ 'မင်းကြားရင်
အဆန်းတကြယ်မဖြစ်သွားဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောရရင်
မင်းငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ကတည်းက ငါ့-ီးက မာနေခဲ့တာ။ အခုလည်း မာနေတာအရမ်းပဲ။
ကိုင်ကြည့်ပါလား' ဆိုပဲ။ သူ့ရဲ့ မာတောင်နေတဲ့ -ီးကိုရေအောက်ကနေပဲ
သွားကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ နည်းနည်းလောက် လက်ကစားပေးပြီးနောက်
သူကျွန်တော့်ငပဲကို လှမ်းထိကိုင်တွယ်ပါရဲ့။ 'Shit! မင်း-ီးအဲဒီ
လောက်ကြီးတာ ငါမိသိဘူးကွ။ နောက်ဆုံး ငါမြင်ခဲ့တုန်းကထက်စာရင်
သူမတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ရင်း 'ငါအခုစိတ်ထဲ
တစ်ခုခုဖြစ်လာနေတယ်ကွ။ -ီးစုပ်ကြည့်ချင်သလိုပဲ။ မင်းဟာကို စမ်းပြီး
ကျွန်တော် သူ့ပါးစပ်က အဲဒီစကားလုံးတွေ ထွက်လာခဲ့တာကို မယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သူကျွန်တော့်ဆီ လှမ်းလာပြီး vice versa အနေအထား ဖြစ်အောင်
'ကိုယ်ကလည်း မငြင်းပါဘူး' ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီးခြင်း
ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် ကားထားတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကြား ၀င်လိုက်ကာ
ထွားကြိုင်းတုန်ခါနေတဲ့ ငပဲကို သူ့လက်နဲ့အားရပါးရကိုင်လိုက်ပါတယ်။
'ငါအရင်တုန်းက တစ်ခုမှမလုပ်ဖူးဘူး။ မင်းကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်တာပဲ၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါတို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက လူတစ်ယောက်
မင်း-ီးကိုစုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ် ကြိုက်တယ်လို့ ခဏခဏ
ငါ့ကိုပြောနေခဲ့တာ မဟုတ်လား' စကားလည်းပြော ကျွန်တော့် ငပဲ ခပ်ထွားထွားကို
သူ့ခံတွင်းထဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ခပ်ဖြေးဖြေး စုပ်မှုတ်ရင်း တစ်ချောင်းလုံး
ကျွန်တော် သူ့ဦးခေါင်းကို ငြင်ငြင်သာသာကိုင်လိုက်ရင်း
ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကွာ.... 'မင်း-ီးကို စုပ်ရင်ကြိုက်တဲ့
ပုံစံမျိုးငါ့ဟာကိုလည်း စုပ် ပေးလေကွာ' ပြောလိုက်တော့
သူကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို လက်နှင့် ခပ်သွက်သွက်ကစားနေရင်းက
ကွမ်းသီးခေါင်းနေရာကို လျှာဖျားလေးနှင့် ၀ဲလှည့်ပါတယ်။
လျှာလေးနှင့်ဖိဖိပြီး လျက်ကစားတာအပြင် သူကျွန်တော့်ပစ္စည်းရဲ့
ကွမ်းသီးခေါင်းကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့် သူ့ပါးပြင်တွေကို အားပြုကာ
ရေခဲချောင်းတစ်ချောင်းကို အားရပါးရစုပ်မြို သလိုမျိုးလုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တစ်ယောက်မှာတော့ ကောင်းကင်ဘုံမှာ မျောနေရင်း အိမ်ထောင်သည်
straight သူငယ်ချင်းရဲ့ စုပ်မှုတ်နေမှုကို ငုံ့ကြည့်မိပါရဲ့။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သူ့ဦးခေါင်းကို ကျွန်တော့်ငပဲကနေ
စွဲဖယ်လိုက်ကာ မပြီးချင်သေး လို့ဆိုပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့်
နေရာပြောင်းမလားလို့မေးကြည့်တော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာနှင့် သူ့နေရာကို
ထွန်းထွန်း အစွန်းတစ်ဖက်ပေါ် တက်လာပြီး ခြေထောက်တွေကားထိုင်တာ
ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်နေရာယူလိုက်တာပေါ့။ အရင်း အဖျား အတုတ်ညီတဲ့
သူ့ငပဲကို အောက်ခြေကနေ ကိုင်လိုက်ကာ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကို
လျှာနဲ့ရစ်ပတ်ပြီး စတင်စုပ်မျိုလိုက်ပါတယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားက စတင်ညည်းညူရင်း
ခံစားရတဲ့ ဖီလင်အရမ်းကောင်းကြောင်း ခပ်တိုးတိုးပြောပါသေးတယ်။
'မင်းပြုစုတာ အရမ်းကောင်း တာပဲကွာ....တစ်ခါမှ ဒီလောက် tempo
သူ့အသံကြားရမိတော့ ခဏငြိမ်ပြီး ဆက်မလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါသေးရဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူ့မျက်ဝန်းကို မော့အကြည့် ရီဝေေ၀နှင့် ညှို့
နေသည့်အလားခံစားမိတာကြောင့် သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲထည့် မမာ့တမာကနေ
သံချောင်းဖြစ်အောင် စတင်စုပ်မျိုတာ ကျွန်တော်လေ ...ရင်ထဲ။
ထွန်းထွန်း...ငရှုတ် ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နှင့်
စုံကိုင်ကာ ငပဲတစ်ချောင်းလုံး လည်မျိုထဲ အရောက်သွင်းတော့တာပဲ။ ရေပူထဲ
စိမ်နေခဲ့ရတာရော၊ ဘီယာကိုနည်းနည်းမော့ထားတာကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး relax
ဖြစ်နေတာနဲ့အမျှ သူ့ငပဲအ၀င်အထွက်သွက် နေ တာကို စိတ်အခန့်မသင့် မဖြစ်ဘဲ
သူ့ငပဲအ၀င်အထွက်ပြုနေတုန်း ရွှေဥတွေ ကို လည်း တစ်ချက်တစ်ချက်
ညှစ်ပေးမိတယ်။ ထွန်းထွန်းခမျာ ကျွန်တော့်အပွတ်အသပ်
အချော့အမြူများကြောင့်ရော လျှာစောင်းထက်မှု ကြောင့်ထင့်
သူ့တင်တွေတုန်ခါလာသလို အသက်ရှုသံလည်းပြင်းလာပါပြီ။ ကျွန်တော်သိတယ်
သူမကြာခင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ၊ ပြီးတော့ သူ့ငပဲ ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေကိုလည်း
ငပဲကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းထဲ ခပ်သွက်သွက် အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာ
ခံစားရတဲ့ဖီလင်က မဆိုးဘူး။ ကျွန်တော့်သူ့ရွှေဥတွေကို ပွတ် သပ်တာအပြင်
ခပ်မာမာဖြစ်နေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အသာကလိပေးတော့
သူ့မျက်လုံးတွေကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လိုက် ရင်း 'သတိထား၊
ခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားကာ သူ့ငပဲကို
ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြုစုသလို သူကလည်း တင်ပါးတွေကို အစွမ်းကုန်
လှုပ်ရှားပါ တော့တယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားက အသံကကျယ်ကျယ်လာပြီး တစ်ချက်တစ်ချက်
အော်ညည်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သူ့ချောကလက် ရည်တွေနှင့်
အပြည့်ဖြည့်တာပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကနောက်ဆုံး တစ်စက်ကျန်တဲ့အထိ
လျှာနှင့် ရစ်ပတ်ပြီး ဆက်လုပ်စုပ်မျိုလိုက်ပါ တယ်။
သူကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲမှ သူ့-ီးကိုဆွဲထုတ်ရင်း နှစ်လိုစွာ
ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြကာ 'မင်း ငါ့လရည်တွေကိုမျိုချတယ်? အဲဒါဘယ်လို နေလဲ?'
မေးသလို သူ့ငပဲကို သူငုံ့ကြည့်လိုက်ကာ ငါတော့ မျိုချနိုင်မယ်မထင်
လို့စကားဆက်သေးတယ်။ သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော် ပြန်ပြောလိုက်ပြီး
သူ့ဦးခေါင်းကိုလှမ်းကိုင်လိုက်ကာ သူ့ပါးစပ်ကို မာထောင်နေတဲ့
ကျွန်တော့်ငပဲအား ငုံခိုင်းလိုက်တာပေါ့။ အစကတော့ သူ့ကိုညှာပြီး
ဖြည်းဖြည်းပဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာ သူက မဖြုံတာကြောင့် သူ့လည်မျိုထဲ
ကျွန်တော့်စိတ်တွေလည်း အရမ်းလှုပ်ရှားကာ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါလာပြီး climax
ရောက်ကာနီးမှာ ငပဲကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေထဲက ဆွဲ ထုတ်လိုက် ပါရဲ့။ ပြီးတော့
သူ့လက်ကို ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင်ခိုင်းလိုက်ကာ 'ခပ်သွက်သွက်ပဲ
-ုပေးတော့ကွာ' သူလည်းမဆိုးပါဘူး အလိုက်သင့် လက်ကိုလှုပ်ရှားတော့ ကျွန်တော်
သူ့ရင်အုပ်ပေါ် ပန်းထုတ်ချင်တယ်လို့ အသိပေးလိုက်ပါရဲ့။ သူကျွန်တော့်ငပဲရဲ့
ကွမ်းသီး ခေါင်းကို သူ့ ရင်အုပ်နဲ့ ပွတ်သပ်ကာ လက်နှင့်
'အား...အ...ပြီးပြီ...အား...ပြီး...ရှီး' ကျွန်တော် လည်း အသံ
ထွက်ညည်းညူလိုက်ရင်း သူ့ရင်အုပ်ပေါ် အများအပြား ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
မတ်မတ်ရပ်ချင်စိတ်နည်းလာသလိုပဲ။ ထွန်းထွန်းလည်း သူ့ရင်အုပ်ပေါ်က
ကျွန်တော့် အရည်ပျစ်တွေကို ကြည့်ပြီး 'ငါတို့ရေချိုးမှထင်တယ်' တဲ့။
'သိပ်ကောင်းတဲ့ Idea ပဲပေါ့'
ကျွန်တော်တို့ ရေပန်းအောက်ကိုဝင်မိကြစဉ်ခဏမှာလဲ ဆက်လက်ပြီး ခဏနေကလို
အလုပ်ဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို နောက်တစ်ကြိမ် စုပ်မျိုမိသလို
သူလည်း မတ်တပ်ရပ်သော ကျွန်တော့်ရှေ့ ဒူးထောက်ကာ ဒီတစ်ခါတော့
ကျွန်တော့်ရွှေရည်တွေကို မျိုချ ပါတယ်။
အ၀တ်အစား ကျွန်တော်တို့လဲလှယ်ပြီးနောက် ဘီယာနှစ်ခွက်လောက်ကစ်ကြသေးရဲ့။
'ဒီည ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို
'ငါ မသိဘူးကွာ....တကယ်မသိဘူး...' ဒါပဲပြောပြီး ထွန်းထွန်းသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။
သူက ဘာမှမသိဘူး ဘာမှန်းမသိဘူး အဖြေလည်းပေးမသွားဘူး။ ကျွန်တော်ကရော
ဒီညလေးရဲ့အဖြစ်ကို ဘယ်လိုသဘောပေါက်အဖြေ ထုတ်ရမည်လဲမသိ။ နောက်နေ့တွေအတွက်
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်..... မသိဘူး ကျွန်တော်လည်း တကယ်မသိဘူးဗျာ။
စာဖတ်သူတို့ကော နောက်ဘာဖြစ်မယ် ဘာဆက်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြပါသလဲ?
Alex Aung (30-12-2010)
စာကြွင်း။ ။ လတစ်လရဲ့ ကုန်ခါနီးရက်တွေမှာ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ
Posted by Alex Aung at 7:22 PM 1 comment:
အိပ်မက်သံစဉ်တစ်ခုကနေလာခဲ့တဲ့ သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တကယ့်အစစ်အမှန်ပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ သေးငယ်လှသော နှစ်ယောက်အိပ် ခုတင်လေးကနေ မှန်းဆကြည့်ရရင်
အတော့်ကို ဝေးလှသော သစ်တောအုပ်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ
ရေအိုင်ငယ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို သစ်တောအုပ်အလယ်က ရေကန်လေးဆီ
လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှ တစ်ဆင့် ကားမောင်းသွားရင် အရာအားလုံးကနေ
ခဏပုန်းကွယ်ရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မှတ်လဲ။ သစ်ပင်ကြီးတွေ အုံ့ဆိုင်း နေတဲ့
အလယ်မှာ တောင်ကျချောင်းလေးမှတစ်ဆင့် ကြည်လင်ကျယ်ပြောသော ရေကန်ငယ်တလျှောက်
လမ်းလျှောက်ရတာ တကယ် ငြိမ်းတယ်။
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ ညတစ်ညမှာ အဲဒီသစ်တောအုပ်အလယ်က
ရေကန်မှာ ရောက်နေခဲ့တယ်လို့ အိပ်မက်ပါရဲ့။ မကြာ ခဏအနားယူလှဲလျောင်းတဲ့
ကျောက်ဖျာပေါ်မှာ အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်တည်းလှဲလျောင်းလို့။ ရေခဲပုံး၊
စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေထည့် ထားတဲ့ခြင်း၊ ပြီးတော့ နေ့လည်ခင်းမှာသောက်ဖို့
၀ိုင်ချိုချိုတွေပါသတဲ့။ ကျွန်တော်ငါးမျှားမနေခဲ့ပါဘူး။ ကမ်းခြေကို
နုညံ့စွာပုတ်ခတ်နေ တဲ့ ရေလှိုင်းခတ်သံနှင့် သဘာဝတောကောင်ငယ်တွေရဲ့
အော်မည်သံ သဲ့သဲ့တွေကို နားထောင်ရင်း ရေကန်အစပ်က ၀က်သစ်ချပင်
လူသူအလာနည်းတဲ့ နေရာဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်နေရာလို
လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတာအမှန်ပါပဲ။ ရေကန်တစ်ဝိုက် ကျွန်တော်
တစ်ယောက်တည်းရှိနေတာဆိုတော့ အဦးဆုံးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာက ၀တ်ဆင်ထားတဲ့
အ၀တ်ဟူသမျှ ချွတ်ကာ အ၀တ်မပါ စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်နေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီကာလရဲ့ အလယ်ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့် နွေးထွေးသော
နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကန်ရေပြင်က ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသော လေနုအေးတွေက
ကျွန်တော့်ရဲ့ အ၀တ်မပါ အသားဆိုင်တွေကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ခံစား
အေးဆေးငြိမ်သက်သော ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိပ်ပျော်ခါနီးအချိန်
တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူဟာ ခြုံပုတ်တွေကို တိုးဝင် ရေကန်ရှိရာကို
လာနေခြင်းပါပဲ။ အပေါ်စီးရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်လှဲ လျောင်းရာနေရာလေးကြောင့်
ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူကို ကောင်းကောင်းမြင်ရမယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ သူ
သို့မဟုတ် သူမ တော့ အရိပ်ထဲပုန်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို
ရုတ်တရက် မြင်ကွင်းထဲကို အသက်၁၈နှစ်ထက်မပိုသေးသော
အလွန်ချောမောသန့်စင်သည့် လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရောက်လာပါ တယ်။ ဒီနေရာကို
ငါးမျှားဖို့လာဟန်မတူ လက်ထဲမှာ ဘာငါးမျှားတံမှ မပါလာ။ တကယ့်ကို
သူ့လက်ထဲမှာ ဘာမှယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါ ဘူး။ ပိန်ပိန်ပါးပါးအရွယ်အစား
ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အရပ်အမြင့်က ၅ပေ ၆လက်မလောက်ဆိုတော့
ကျွန်တော့်အရပ်အမြင့် ၆ပေထက်စာရင် နိမ့်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့
အညိုရင့်ရောင်ဆံနွယ်တွေက သူ့ပခုံး တ၀ိုက်မှာနေရောင်တွေနှင့်
တောက်ပလို့ပါပဲ။ သူ့ရဲ့သမင်မျက်လုံးတွေထဲ မျက်ဆံအရောင်ကိုတော့
သေချာမမြင်ရပါဘူး အညိုဖျော့ ရောင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့အသွင်အပြင်က
အရာအားလုံး perfect ဖြစ်လုနီးပါးပေါ့လေ။ လှပအေးချမ်းတဲ့နေ့လေးထဲမှာ
အပြုံး လှလှနဲ့ မြင်ကွင်းထဲပေါ်ထွက်နေတာက ပန်းသွေးရောင် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးရဲ့
ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်က ချစ်စရာ ပါးချိုင့်လေးနှစ်ပွင့်ကြောင့်။
ကောင်ငယ်လေးက သူ့အပေါ်တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကနေဆွဲချွတ်လိုက်ကာ
မြေပြင်ပေါ်ချလိုက်ပါတယ်။ ချောမွေ့ဖြူဖွေးတဲ့ ရင်အုပ်တွေကို လှစ်ဟပြရင်း။
နောက်တော့ သူ့ဂျင်း(န်)ဘောင်းဘီ ခပ်ကျပ်ကျပ်က ကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်တာ
ခြေထောက်က ခြေညှပ်ဖိနစ် ဒီဇိုင်းဆန်း ဆန်းကို ကန်ထုတ်အပြီးမှာပေါ့။
ဂျင်းဘောင်းဘီကို သန်မာတဲ့ပေါင်တံတွေကနေ အတင်းခွာရင်း ခဏနေက
သူ့အောက်ပိုင်းမြင်ကွင်းကြောင့် အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ
ကျွန်တော်ရှူသွင်းမိရဲ့။ သူ့ငပဲမာပြီးတောင် လာရင် ဘယ်လိုနေမလဲ
ကျွန်တော်မြင်ချင်မိပါပြီ။ ပုံသဏ္ဌာန်လှပ တစ်ရစ်တဲ့
ပေါင်တံနှစ်ခုကြားမှာတော့ ကြက်မလေးရဲ့ ဥတွေလို ရွှေဥ နှစ်လုံးက
ကပ္ပယ်အိပ်ထဲတွဲကျလျက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သတိထားမိစဉ်မှာတော့
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းအစုံက မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကို ပြူးကြည့်နေမိတာ ပြီးတော့
နှုတ်ခမ်းလွှာထဲမှ သွားရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှက်လိုက်တာ..။
ဘယ်ကနေစပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဦးခေါင်းထဲ ရှင်းသွားဖို့
ခေါင်းကိုခါရမ်းမိပါတယ်။ မျက်ဝန်းများကို ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့
ကန်ရေ ပြင်ကျယ်မှာ သူကူးခတ်နေပါပြီ။ ရေပြင်မှာ ကူးခတ်နေတဲ့ ခြေတံတွေရယ်
လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း ရင်ခုန်ဖွယ်မြင်ရတာက ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်း တဲ့
တင်ပါးအစုံပါပဲ။ ကြည်လင်နေတဲ့ ရေပြင်ထဲ အားရပါးရ ဆော့ကစားကူးခတ်နေတာ
အချိန်အတော်ကြာမှ အပေါ်ကိုတက်လာပြီး ရေစပ်မှာ အသာရပ် ရေစစ်ပြီးမှ
အ၀တ်ပုံရှိရာကို လှမ်းလာပါတယ်။ အ၀တ်ကိုကောက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှ
ကျွန်တော့်ကို မြင် သွားပါရော။ သူ့ပါးပြင်မှာ
ရဲရဲနီရှက်သွေးဖြန်းသွားပေမဲ့ အ၀တ်မဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့
ကျွန်တော် ထထိုင်လိုက်ရင်း သူ့ဆီလက်လှမ်းပြလိုက်ကာ 'ဟေး...ညီလေး...
ကိုယ်နဲ့အတူ လာစားပါလား။ နှစ်ယောက်စာ အစားအစာ တွေ ခြင်းထဲမှာအပြည့်၊
ပြီးတော့ ၀ိုင်အေးအေး ဒါမှမဟုတ် ရေ သောက်ချင်ရာရွေး'
အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းစွာ ကောင်လေး ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့
နေရာကိုလှမ်းလာတယ်။ ချီတုံချတုံတော့ရှိတာပေါ့လေ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ
ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့အ၀တ်ပုံကို တစ်ချက် လှည့်ကြည့်သေးရဲ့။ သူ
ပခုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်ကာ ကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းတာကို သဘောညီ ကြောင်း
'ညီ...ခဏနေရင် စားပါ့မယ်။ နည်းနည်း ၀မ်းဟာနေပြီဗျ' ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ ခြေလှမ်းနည်းနည်းအကွာမှာ ရပ်ရင်းပြော နေတာလေ။
ခြင်းတောင်းထဲက တဘက်အသန့်ကိုယူပြီး သူ့ကိုပစ်ပေးလိုက်တယ်။ လေထဲမြောက်ကနဲ
လွင့်လာတဲ့ တဘက်ကိုယူပြီး ပါးချိုင့်နှစ် ဖက်ပေါ်လာအောင် သူပြုံးလိုက်ကာ
'ကျေးဇူး..အစ်ကို' လို့ပြောရင်း တစ်ကိုယ်လုံးခြောက်သွေ့အောင်
သုတ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် နံဘေးကို သူအသာဝင်ထိုင်ချိန်မှာတော့
ကျွန်တော့်အ၀တ်အစားတွေပုံထားတဲ့နားကို ပစ် ထည့်လိုက်ပါရဲ့။
'ဘာကိုသုံးဆောင်မလဲ? အအေးလား ဒါမှမဟုတ် ရေသန့်?'
'အအေးတစ်ပုလင်းဆို ပိုပြီးကောင်းမှာ' အဲဒါလောက်ဆိုတော်ပါပြီဆိုတဲ့ လေသံနှင့်ဆိုတယ်။
ကျွန်တော် အအေးပုံးထဲက Coke နှစ်ဘူးယူလိုက်ကာ တစ်ဘူးသူ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား toast လုပ်လိုက်ကြ ရင်း နည်းနည်းစီ
သောက်လိုက်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ကြပါတာပေါ့။
'ညီက Andy, တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်'
နှစ်ဦးသားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်။ 'မကြာခဏ ကိုယ့်ရေကန်ကို
မင်းရေလာကူးတာလားညီ? ကိုယ်ကတော့ အလုပ်အားချိန် တိုင်းလာဖြစ်ပါရဲ့။
ဒီနေ့လည်း ရာသီဥတုက သာယာတာနဲ့လေ'
သူ့မျက်ဝန်းတွေပြူးကျယ်သွားကာ သက်ပျင်းချလိုက်ရင်း 'ဒီနေရာက အစ်ကို့နေရာ?
အိုး...sorry အစ်ကိုရယ်၊ ညီမလာပါဘူး ဒီနေရာ ဟာ တစ်ဦးဦးပိုင်....'
'Relax. ညီ ဒီနေရာမှာ ရေလာကူးနိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ်
ကိုယ့်သစ်တောအုပ်လေးထဲမှာ လာပုန်းနိုင်ပါတယ်ကွ။ ဒီသစ်တောလမ်းလေးရဲ့
အဆုံးက ကိုယ့်အိမ်မှာလည်း လာနားနိုင်ပါတယ် အလည်ပေါ့။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ
၀ိုင်အေးအေးတွေ ဘီယာတွေ အဆင်သင့် မင်းကြိုက် တတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်'
ကောင်လေး အပြုံးတွေပေးပြန်ပြီ။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ
မသိမသာကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော့်ပေါင်ဂွဆုံကို
တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းက စကားသံတိုးတိုးပေါ်ထွက်လာပါရော။
'ရေကန်ထဲမှာ ကူးနေတုန်းကတည်းက ညီ့ကိုကြည့်နေတာ မြင်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေ ရှက်သွေးကြောင့် ပူနွေးသွားသလားခံစားရကာ
ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ သူမြင်ရတဲ့
မြင်ကွင်းကိုကြိုက်မှန်း။ အဲဒါကို ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ သူ့ထက်
၁၀နှစ်ကျော်လောက်ကြီးတဲ့ အရပ် ၆ပေနဲ့ညီအောင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့
ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်ကို သဘောကျနေတဲ့ဟာ။ ကျွန်တော့်ငပဲက သူ့ညီဘွား
မာတောင်လာတဲ့ အခြေအနေရဲ့ တစ်လက်မလောက်တော့ ပိုရှည်မှာ။
ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေက အုံထူပြီး မည်းနက်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာက
နုညံ့တဲ့ သူ့မျက်နှာ ထက်စာရင် ပါးသိုင်းမွှေးရေးရေးရှိတော့
ကြမ်းတယ်ပေါ့လေ။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက အနက်ရောင် စစ်စစ်။
သူ့အကြည့်သူခိုးတွေက မမာ့တမာ ကျွန်တော့်ငပဲဆီရောက်ရောက်နေသား။
ကျွန်တော့်ခြင်းကြီးကို အလယ်ချပေးလိုက်ပြီး စားချင်တာ
စားလို့ပြောလိုက်တယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ပေါင်မုန့်ချပ်တွေ၊ သုတ်ပြီးစားဖို့
ချိ(စ်)၊ စတော်ဘယ်ရီယို၊ ၀ိုင်နဲ့အတူမြည်းဖို့caviar ၊ ခပ်တုတ် တုတ်
၀က်အူချောင်းကျော်တွေအပြင် အိမ်နားက ဒေါ်နန်းစိန်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့
နာနတ်ယိုပါပါသေး။ ဒေါ်နန်းစိန်က သူ့အိမ်လုပ် ဂျယ်လီ တွေ၊ ယိုတွေကို အမြဲ
ကျွန်တော်စားဖို့ပေးတယ်။ ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်၊ ဓားနှင့်ခက်ရင်း၊
လက်သုပ်ပ၀ါသန့်သန့်နှင့် ကျွန်တော် တို့ ပျော်ပွဲစားအသေးလေးကို
ကျွန်တော်တို့ စကားမဆိုဘဲ စားသောက်နေကျတာ ပေါင်မုန့်တစ်ချက်ကိုက်လိုက်
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ခိုးကြည့်လိုက်။ ဗိုက်ဝ အောင်စားပြီးနောက်
ယူလိုက်ပါတယ်။ အအေးမော့နေတုန်း မှာပဲ သူ့လက်သွယ်သွယ်တွေဟာ
ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကြား စကားလုံးတွေမှ မလိုတာပဲ။
ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူ့ရင်အုပ်ဆီ ထားလိုက်ကာ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို
အသာအယာပွတ်သပ်မိပါပြီ။ ခပ်တိုးတိုးညည်းညူသံပေးလိုက်ရင်း သူ
ကျွန်တော့်လက်မောင်းအစုံထဲ အသာခိုဝင်လာပါရော။ အတူဘေးချင်းယှဉ်
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ဒီလိုရောင့်ရဲတဲ့ ခံစားမှုမျိုးတစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး။
အဲဒါပြီးတော့ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ကနိုးထလာပါတယ်။ မနက်ခင်း
တောင်ကုန်တော့မှာပါလား။ နောင်တသက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ကာ ရေချိုးခန်းဆီ
ရေချိုးဖို့ ပါးသိုင်းမွှေးရိတ်ဖို့ ကျွန်တော်ရွေ့ရပါရဲ့။ အ၀တ်ဟောင်းတွေ
အ၀တ်ခြင်းထဲထည့် မီးဖိုချောင်ထဲ နံနက်စာပြင်ဆင်ဖို့
၀င်လာချိန်နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်တော့ ၁၁း၀၀နာရီ ထိုးနေ ပါပေါ့။
ကောင်းလိုက်တာ ဒီနေ့ စနေနေ့ပဲ။
ဒေါ်နန်းစိန်ပဲပေးထားတဲ့ သူ့ခြံထွက် ကြက်ဥလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နှစ်လုံးကို
မကျက်တကျက်ကြော်လိုက်တယ်။ ပန်းကန်ပြားထဲ စတော်
ဘယ်ရီယိုသုတ်ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ်နှင့် အတူထည့်လိုက်ရတာပေါ့။ တစ်နေ့နေ့တော့
ဒီအန်တီကြီးရဲ့ မေတ္တာစေတနာအတွက် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးဦးမှပါ။ မနက်စာအဖြစ်
မီးဖိုချောင်စားပွဲမှာ ပေါင်မုန့်၊ ကြက်ဥကြော်၊ လိမ္မော်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်၊
ကော်ဖီခါးခါး တစ်ခွက်တို့ကို ထိုင်ပြီး စားသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Jelly
ကိုမြင်တော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မက်ခဲ့သော အိပ်မက်ကို သတိရမိရပါ၏။
အိပ်မက်ထဲက လူငယ်လေးဟာ တကယ်မဟုတ်ပေမဲ့ တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ပေါင်ကြားက
ညီဘွားကို ခေါင်းထောင်လာစေရော။ တွေးမိတာ လေးပျောက်သွားအောင်
ခေါင်းကိုရမ်းကြည့်ပေမဲ့ ပျောက်မသွားပါဘူး။ ကြိမ်ခြင်းကြိးထဲ
မုန့်ပဲသွားရေစာတွေထည့်၊ ပြီးတော့ အအေးပုံး ထဲ ဖျော်ရည်ဗူးတွေဖြည့်ကာ
ရေကန်လေးဆီ သွားဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဂိုထောင်ထဲက
ဂျစ်ကားကို အသာထုတ် သစ်တောထဲက ဖုန်ထူထူလမ်းကတစ်ဆင့် ရေကန်ရှိရာဘက်ကို
ခါတိုင်းရပ်တဲ့နေရာမှာပဲ ကားကိုပါကင်လုပ်၊ ယူဆောင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို
ဆွဲကိုင်ကာ ရေကန်နားက ကျွန်တော်နားခိုနေကျနေရာ လေးကို လမ်းသွယ်လေးအတိုင်း
လမ်းလျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။ သစ်ခွပန်းတွေအများအပြားရှိနေတဲ့ အပင်ကို
ကျော်လိုက်တာနဲ့ မြင် လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ
တကယ်အသက်ရှူမှားလောက်အောင်လှပပါရဲ့။ ဟိုးအရင် သုံးလေးပတ်လောက်က ကျွန်တော်
သစ်တောတခွင် လှည့်ကြည့်တုန်းက ဒီရေကန်နေရာကို ရှာတွေ့ခဲ့တာ။ ခပ်အုပ်အုပ်
၀က်သစ်ချပင်ကြီးနားရောက်တော့ ၀တ်လာတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ဆွဲချွတ်၊
သားရေရှူးကို ကန်ချွတ်၊ပြီးတော့ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချကာ ညီညာနုညံ့တဲ့
အချိန်အတန်ကြာ ငြိမ်သက်အေးဆေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာ မျောနေပြီးနောက်
ကျွန်တော်ထထိုင်လိုက်ကာ ရေခဲဗူးကိုဖွင့်လိုက်ပါ တယ်။ ကျွန်တော့်အကြိုက်
ရေကန်တစ်ဝိုက်ခြုံငုံကြည့်နေမိပါရဲ့။ Andy ဆိုတဲ့ ဘိုဆန် ဆန်ကောင်ကလေး
ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာတာကို မျှော်လင့်နေမိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့
တစ်ယောက်တည်း။ သက်ပျင်းတစ်ချက်ချ ပုလင်းလေးထဲက လက်ကျန်ကို မော့ကာ
ပက်လက်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ မျက်ဝန်းများကို အသာမှိတ်လိုက်စဉ်မှာတော့
ကျွန်တော် လျှင်လျှင်မြန်မြန်ကို အိပ်မောကျသွားရတာ။
နွေးထွေးတဲ့ အပွေ့အဖက်၊ စိုစွတ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံနှင့် အားရပါးရ
အနမ်းခံရတာတွေကြောင့် ကျွန်တော်နိုးထရပါပြီ။ အိပ်မက်ဟာ ဘယ်နေရာမှာ ရပ်
ဘယ်နေရာက ဆက်ဆိုတာ အလိုလို ဖြစ်နေတာလို့ ထင်ပါရဲ့။ သူ့အာခံတွင်းထဲမှ
ပူနွေးနေတဲ့ လျှာဟာ ကျွန်တော့် အာခံတွင်းအနှံ့ ထိတွေ့နေတာ
တကယ့်အစစ်အမှန်အတိုင်း ခံစားရပါတယ်။ ဒါအိပ်မက်တစ်ခု မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
သေးသွယ်ကျစ်လစ်တဲ့ သူ့ကိုယ်လေးဟာ ကျွန်တော့် လက်မောင်းတွေထဲ ရောက်နေသလို
မာပြီးတောင်နေတဲ့ သူ့ညီဘွားဟာလည်း ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံက အမြှောက်တံနှင့်
ကျွန်တော်တို့လက်တွေဟာ နှစ်ဦးသားခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ပွတ်သပ်၊ ဖျစ်ညှစ်
ခံစားမှုတွေ မြှင့်တင်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်း တွေဟာ
ရှည်ရှည်ထွားထွား သူ့ငပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပွတ်သပ်ရင်း အံ့အားသင့်စဖွယ်
ရွှေဥတွေကို ကလိပေါ့။ ဖယောင်းတိုင်တွေလို အရွယ်ညီတုတ်ခိုင်တဲ့
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းအချို့ကို ကောင်လေးပါးစပ်ထဲ စုပ်ပြုဖို့ ပန်းနုရောင်
နှုတ်ခမ်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တာ သူ တကယ့်ကို စိတ်နိုးထလာအောင် နှုတ်ခမ်းသားတွေ
လျှာတွေနှင့် ကစားတယ်လေ။ စိုစွတ်နေတဲ့ လက်နှစ်ချောင်းကို ဖြိုးဖြိုးအိအိ
သူ့ တင်ပါးအလယ်က ခရေပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ကျွန်တော် ခပ်ဖြေးဖြေး
'Damm...မင်းလေးက အရမ်းဟော့တ်တာပဲ။ I want to fuck you'
'ညီလည်း အဲဒါကို လိုချင်နေတာ' ခပ်တိုးတိုး သူညည်းညူလိုက်ရင်း
ကျွန်တော့်ကို ရီဝေေ၀ကြည့် တယ်။
Andy ပက်လက်အနေအထားမှာ ဒူးကိုရင်ဘတ်ဆီကွေးတင်ရင်း လက်နှစ်ဖက်နှင့်
ထိန်းထားတော့ ကျွန်တော်က တံတွေးချောဆီကို လက်ထဲထွေးထည့်
ငပဲကိုမံလိုက်ပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းကို ခရေပေါက်ဆီ တေ့လိုက်ပါတယ်။
နှစ်ဦးသား အသက်ရှူသံတွေက မြန်လာသလို ပါပဲ။ ကျွန်တော်
တဖြေးဖြေးခြင်းဖိသွင်းနေစဉ် သူရုတ်တရက် ဖင်ကိုလှုပ်ပြီးဆောင့်လိုက်တာ
ငပဲတစ်ချောင်းလုံးနီးပါး ၀င်သွားရော။ သူ လည်း အောင့်သွားတယ်ထင်ရဲ့
ခဏငြိမ်သွားသလို ကျွန်တော်လည်း သွေးကြောထဲထိ ဆိမ့်ကနဲဖြစ်သွားရကာ
ဟူး....ခပ်အေးအေး လေတစ်ချက် တိုက်လိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော်
သက်ပြင်းမောနှင့်အတူ နိုးထရပါရော။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မာန်
ဟုန်ပြင်းနေပြီး ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း အရမ်းမာနေတာကြောင့်
လက်ကစားလိုက်ရပါပြီ။ အိပ်မက်ထဲက ခံစားချက်တွေဟာ အမြင့်ဆုံး orgasm
ဖြစ်တဲ့အထိ ပေးစွမ်းပါသေးတယ်။ အောက်ကခင်းထားတဲ့ အခင်းလည်း ချွေးနှင့်အတူ
ယူဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပြန်ထည့်တော့မှ ယူလာတဲ့အစားအသောက်တွေထဲ စားစရာတွေ
တစ်ခုမှမထိမိကြောင်း သတိထားမိတော့တာပါ။ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်၊ ဂျင်း(န်)
ဘောင်းဘီကို ကောက်စွတ်၊ ပြီးတော့ ညစ်ပတ်နေတဲ့အခင်းကို ခေါက်လိုက်ကာ
ခြင်းထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ မလှမ်းမကမ်းမှာ ချွတ် ထားတဲ့
အိမ်ကိုပြန်ရောက် တံခါးဝအရောက်မှာတော့ တစ်ယောက် တည်း အထီးကျန်တဲ့
တိုင်းရင်းသားဆိုလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း။ တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းမှာတော့
မိသားစုက ရပ်ဝေးမြေခြားထွက်ခွာသွားကြတယ်။ ကျွန်တော့်အသွင်အပြင်က
အတော်ကြည့်ကောင်း တဲ့ အထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ boyfriend
တစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့ဖူးပြီး မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက် ဘယ်တော့မှ
turn-on မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် bf က
အဆက်အသွယ်ကတော့မပြတ် ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အသက် ရှင်သန်မှုနှင့်
သူ့အသက်မွှေးမှုကကွာခြားကြတာကိုး။ အခုတော့ သူ ကျွန်တော့်ထက်သာတာ
ရသွားပြီထင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်က နည်းပညာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေ ဦးစီးပေးသော
အကြီးစားစက်ပစ္စည်းတွေ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖွင့် ထားပါတယ်။
ဆိုင်က အခြေအနေကောင်းတာကြောင့် မြို့ဝန်းကျင်မှာ
စဉ်းစားတာစောများနေသလား ထားပါ...အ၀တ်တွေ အားလုံးချွတ် ရေပန်းအောက်
၀င်နေချိန်မှာ ရေစက်တွေရဲ့ ထိတွေ့မှုက ပိုသာယာပါတယ်။
အင်း...ကျွန်တော့်အတွက် လုပ်သက် ၅နှစ်နီးပါးရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မန်နေဂျာ
ဇော်ဦးလွင်ကို ခေါ်ပြီး စီစဉ်စရာရှိတာ စီစဉ်ဦးမှပါပဲ။ အဓိကဆိုင်မှာ
လည်းကောင်းကောင်း စီမံခန့် ခွဲနိုင်သလို ဆိုင်ခွဲနှစ်ခုမှာလည်း
အလားတူကောင်းကောင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ထဲမှာမနေပဲ
သစ်တောအစပ်က ဒီအိမ် မှာ နေဖြစ်နေတာဆိုတော့ သူလာလို့အဆင်ပြေပါ့မလားမသိ။
နေရာတွေကို ကမ္ဘာတစ်ပတ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မပေါ့။
တနင်္ဂနွေည၊ ကျွန်တော့်အိပ်မက်က ပြန်လည်ခရီးဆက်ပါရော။ ကျွန်တော် Andy ကို
-ိုးနေခဲ့တာလေ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးအောက်မှာ။ အိုး....ဖီလင်အရမ်းမိုက်တယ်
ခပ်ကြပ်ကြပ် ခရေပေါက်ထဲ အားနှင့် အရှိန်မပြတ်ဆောင့်ချိန်မှာ
သူလည်းနာကျင်မှုကို ကြိတ်မှိတ်စရာမလို စိတ်တိုင်းကျ အော်ဟစ်နိုင်တာကြောင့်
ချုပ်တည်းမှုမရှိသူ့အသံက ကျွန်တော့်ကို ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ငပဲက သူ့ခရေ၀ ထဲအ၀င်အထွက်ပြုချိန်မှာ သူ့ငပဲဟာ
ကျွန်တော့်ဗိုက်ကြွက်သား အန်စာတုံးတွေနှင့် ပွတ်သပ်နေရော။ ခဏအကြာမှာတော့
နှစ်ဦးသား အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ကို မရှေ့မနှောင်းရောက်ကြပါပြီ။
ချွဲပျစ်ပျစ်အရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားနှင့် ရင်အုပ်တွေမှာ
ကျွန်တော့်ငပဲကိုကြည့်ပြီး ရယ်မော မိပါတယ်။
'အစ်ကိုရယ်....အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ညီတို့နေ့တိုင်းအတူတူရှိရင်ကောင်းမှာ။ ညီ
သိတယ်...တွေ့ဆုံရုံလေးပဲရှိသေးတာ အစ်ကိုနဲ့လေ။ ဒါပေမဲ့
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော်သူ့စကားကိုဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။
'ညီ့ကိုချစ်ပါတယ် အစ်ကိုလဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာအိပ်မက်တစ်ခုပါ။
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိနေတတ်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံအဖော်မွန် ပုံသဏ္ဌာန်လေးတစ်ခု
ထင်ပါရဲ့။ ညီဟာ အစစ်အမှန်လူသားဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်'
သူ့ရဲ့ လှပတဲ့မျက်နှာလေးမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားဟန် ပေါ်လာတာကို
နောက်ဆုံးငေးကြည့်ရင်း ချွေးအရွှဲသားနဲ့ ကျွန်တော်နိုးလာပါတယ်။
'Noooooo!' ကျွန်တော့်အသံ တဆုံးအော်လိုက်မိသံဟာ မနက်စောစော
တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များမှာ ကျွန်တော့်စီးပွားရေးကို ကောင်းကောင်း
ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့လို့တော်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်စီးပွား
တိုးတက်ဖို့ မစိုးရိမ် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်ချင်မိအောင် အိပ်မရခဲ့တာ
နှစ်ညရှိခဲ့ပြီ။ အိပ်မက်ထဲကို နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်မသွား
ချင်တော့ဘူး။အိပ်မက်က နိုးထလာတာနဲ့ Andy ကထွက်သွားမှာပဲ မဟုတ်လား။
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေမှာ မျက်ရည်တွေဖြင့် စိုစွတ်ပြီး
နည်းနည်းလေး အိပ်ပျော်လိုက်တာနဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ပြည့်တော့မှာ။ Andy က
သူ့သဏ္ဌာန် ဟန်ဟာ တကယ့်အစစ်အမှန် ထပ်ထူညီတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲက
ချစ်သူဆိုတာ နားလည်စေဖို့ ကြိုးစားနေမှုများလား။ သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံရတာ
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါနေအောင် ကျေနပ်ရသလို နိုးထလာ ချိန်ထိ
ဘယ်လိုမှ မရပ်တည်နိုင်ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါ အစစ်အမှန် မဟုတ်မှန်း
ကျွန်တော်သိနေခဲ့ချိန်တွေရဲ့အဆုံးစွန်မှာတော့ ကျွန်တော့် စိတ်တွေဟာ
လေဟာနယ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဟင့်အင်....နှစ်ပေါင်းများစွာ အထီးကျန်နေခဲ့ရတာ
သြဂုတ်လရဲ့ တောက်ပတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ကြိမ်ခြင်းကြီးကို
နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ် အရင်တစ်ခါထည့်တဲ့
ပစ္စည်းများနှင့်မတူသောအရာတွေကိုပေါ့။ ပစ်စတို တစ်လက်ရယ် ကျည်ဆန်တစ်ဘူးရယ်
မြို့ထဲက ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်။ သေနတ် ထဲမှာ ကျည်ဆန်ဖြည့်ပြီးသားပါ။
အိပ်မက်က ကျွန်တော်တဖန်နိုးထလာတာနဲ့ ပစ်စတိုက ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာဆိုတော့
ဒေါ်နန်းစိန်ရဲ့ အိမ်ဘေးက အဖြတ် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လက်ဝှေ့ရမ်းပြ
နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကားပါကင်ထိုး၊ ရေကန်ရှိရာ ကျွန်တော်
ခပ်နှေးနှေးခြေလှမ်းတွေဖြင့် သွားနေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်နှလုံးတွေဟာ
အရင်ရောက်ခဲ့တဲ့ နေ့များထက် ပိုပေါ့ ပါးနေသယောင်။ ၀က်သစ်ချပင်ရဲ့
အရိပ်အောက် ကျွန်တော့် Andy လေး ယိုင်နဲ့နဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ
ထာဝရတွေ့ဆုံဖြစ်တော့မယ့် အစီ အစဉ်။ ကမ္ဘာတပတ် ခရီးစဉ်မထွက်ဖြစ်တော့ဘဲ
အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲ သွားတော့မယ့် ကျွန်တော်ရယ်လေ။
လမ်းသွယ်လေးထဲ ၀င်လာရင်း ကျွန်တော့်အတွေးစိတ်အလျဉ်ဟာ လေဟာနယ်ထဲ
ပိုရောက်လာသလိုပဲ။ သာယာလှပတဲ့ ဒီရေကန် ဒီဝန်းကျင်
နောက်တစ်ခါ...အား...ဘာမှမတွေးတော့ဘူး စိတ်ထဲက ထုတ်ပစ်။
နောက်ဆုံးခရီးတစ်ခုကို ပျော်ပျော်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် ပါတယ်။
လမ်းအတိုင်း မနှေးမမြန်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ ရေကန်နားကို
၀က်သစ်ချပင်အောက် အကြည့်ကိုရွေ့မိတော့ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ ရုတ်တရက်
ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတာကို မယုံနိုင် ပါဘူး။
သစ်ပင်အိုကြီးရဲ့ အောက်က မြက်ခင်းကမ္ဗလာမှာ Andy လှဲနေတာ။
ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ခါရမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ အခုအချိန် အိပ်မက်တစ်ခု
လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ပက်လက်အိပ်လျက်၊ လက်တစ်ဖက်ကို သူ့မျက်ဝန်းပေါ်မှေးတင်ကာ
အ၀တ်မဲ့ သူအိပ်ပျော်နေတာ။ လက်က သယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော် ပစ်ချပြီး
လှဲအိပ်နေရာက ထထိုင်၊ သူ့မျက်လုံးတွေကို ပွတ်သပ်ရင်း ကျွန်တော့်ကို
တည့်တည့်ကြည့်တယ်။ မျက်ဝန်းတွေ ပြူးကျယ် ပါးစပ်က အံ့သြ၀မ်းသာသံထွက်ကာ
သူ့နံဘေးကို ကျွန်တော်ဝင်ထိုင်ပြီး အပျော်တွေအပြည့်ဖြင့် သူ့ကိုဖက်ကာ
အမေးကိုဖြေလိုက်ပါတယ် 'No, အချစ်လေးရယ် ဒါတကယ့် အစစ်အမှန်ပါ'
ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူလှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း ဝေခွဲမရဖြစ်နေဟန်။
'ရေကန်....ဒါအိပ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်မယ်။ ဒီနေရာကို ညီဘယ်လိုရောက်လာလဲ?'
'နောက်ဆုံးဘာတစ်ခုကို ညီမှတ်မိလဲ အစ်ကို့ကိုပြောပြကြည့်'
'ညီ့အထင် တီဗီရှေ့က ဆိုဖာပေါ် ဇာတ်လမ်းတွဲထိုင်ကြည့်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတာ။
'အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် မနိုးထချင်တော့ဘူး။ မင်းဟာ အစစ်အမှန်ဆိုတာ
ယုံကြည် ဖို့ ကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲခဲ့တယ်။ မင်းနဲ့အတူ အမြဲနေနိုင်ဖို့ဆို
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလိုက်တာ တစ်နည်းပဲရှိတယ်လို့တွေးခဲ့တာ။ ဒါကြောင့်
'မဟုတ်ဘူး!! အခုမဟုတ်တော့ဘူးလေဗျာ။ အစ်ကို တကယ်ပဲ ဒီအနားမှာ နေတာလား?'
ခေါင်းကို အသာဆတ်ပြလိုက်ရင်း 'ဟုတ်တယ်..လမ်းသွယ်လေးအတိုင်းဆင်းသွားရင်
သစ်တော့ကြီးရဲ့ အစပ်က အိမ်မှာနေတာ။ ဒါပေမဲ့ ...ညီ...မင်းဘယ်မှာနေတာလဲ
အိပ်မက်ထဲမှာ မင်းဘယ်မှာနေလဲ မမေးခဲ့ဖူးဘူးကိုယ်'
'ညီ ဒီရေကန်နဲ့ဆို မိုင်ငါးဆယ်လောက်ဝေးမယ်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ ညီ့ဦးလေးအိမ်ကို
လာလည်နေတာ နှစ်ပတ်မကတော့ဘူး။ သူ့အိမ်က အစ်ကို့အိမ်နဲ့ နည်းနည်းပဲဝေးတယ်။
ညီရေကန်နားရောက်နေတာဆိုတော့ ဦးလေးအိမ်မှာ မရှိနိုင်ဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ်'
အကြောင်းရင်းကို ရှာဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ကားပေါ်
သူ့ကိုတင် ရေကန်ကိုထားပစ်ခဲ့လိုက်တာပေါ့။ ကားပေါ် အတက် သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ
အ၀တ်မရှိမှန်း သတိထားမိသွားပြီး သူ့မျက်နှာ ရဲရဲနီသွားပါတယ်။
'ကောင်းပြီ' ဒေါ်နန်းစိန် အပြင်ထွက်သွားလောက်ပါတယ်။ 'ရာသီဥတုက အရမ်းပူတော့
ဥယျာဉ်ထဲထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်လား မထွက်ဘူး လား မသေချာဘူး။ သူ့အိမ်က
ကိုယ့်အိမ်နှင့် သစ်တောလမ်းအကြားမှာရှိတယ်။ တကယ်လို့ သူအပြင်မှာဆို
ကိုယ်တို့ အခြေအနေ ကြည့်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ထဲရောက်အောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့'
အိမ်နားကိုအရောက် ဒေါ်နန်းစိန်အိမ်ဘက်ကို တစ်ချက် check လိုက်တာ
သူ့အိမ်မှာမြင်နေကျ လိပ်ခုံးကားလေးမရှိဘူးဆိုတော့ အပြင် ထွက်သွားပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား ခပ်အေးအေး ကျွန်တော့်အိမ်ဆီ ၀င်လို့ရသည်ပေါ့။
Andy ပြောတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်း ခွက်ကိုအသာမ ပြီး နှိပ်လိုက်ပါတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ခပ်သြသြအသံနှင့် တုန့်ပြန်သံကိုကြားရပါရဲ့။
'ဟယ်လို, Andy အိမ်မှာရှိပါသလားခင်ဗျာ? သူနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါ'
'မရှိဘူးကွ၊ ဦးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူထွက်သွားပြီ။ သူ့ကားက ဦးခြံထဲက
ဂိုထောင်ထဲမှာပဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အပြင်ထွက် သွားတာဖြစ်မယ်။
'သူ့....သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါပဲဗျ။ ကျွန်တော့်နာမည် ကျော်ဇင်ပါ။
ဦးအိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ နေရာမှာနေပါတယ်'
'ကောင်းပြီလေ Andy ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဦး သူ့ကိုသေချာပြောလိုက်ပါ့မယ်'
ဖုန်းလက်ကိုင်ခွက်မှာ နေသားတကျပြန်ထားလိုက်ကာ Andy ဘက်ကို ကျွန်တော်
'မင်းအိမ်မှာ မရှိဘူး။ အစစ်အမှန်ပဲ ညီ'
ဖွင့်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ Andy အပြေးလေးခိုနားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မသိခဲ့ ဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့အရာက အိပ်မက်တွေကို
အမှန်တရားဖြစ်စေခဲ့သလဲဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
သူကျွန်တော့်ကို အိပ်မက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်သူ့ကို
အိပ်မက်နေခဲ့တာ။ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ကမ္ဘာပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အချစ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့ပါ၏။
Alex Aung (23-12-2010)
Posted by Alex Aung at 7:22 PM No comments:
သက်တန့် ဒိုင်ယာရီ - မှိုင်းညှို့မိုးစက်(ကပူချီနို)
တဖွဲဖွဲကျနေတဲ့ မိုးစက်တစ်ချို့က လေ၏ ဆော့ကစား ပုတ်ခတ်မှုကြောင့်
သူ့မျက်နှာပေါ် လွင့်စင်ရိုက်ခတ် လာပါသည်။ ဘယ်အရာနှင့်မှ
ကာရံထားခြင်းမရှိသော ဝရန်တာတွင် သူရပ်နေသည့်အတွက် မိုးပက်ခြင်း ကိုတော့
ခံရပါသည်။ သူမျှော်လင့်ကြီးစွာဖြင့် ဝရန်တာ အပြင် ဘက်သို့
ခေါင်းအနည်းငယ်ထုတ်ကာ လမ်းထိပ်ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပါသည်။ ဆရာ……
ဆရာ ဒီနေ့မှ နောက်ကျနေသည်။ အရင်ကဆို အချိန်မှန်မှန်လာနေကျဆရာက ဒီနေ့မှ
နောက်ကျနေသဖြင့် သူဆရာ့ကို ဝရန်တာဘက်ထွက်မျှော်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီကျူရှင်ဝိုင်းတွင် သင်သမျှ ဆရာတွေအကုန်လုံးထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်သော
ဆရာ့ကို သူချစ်ကြောက်လေးစားမှု အရှိဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ့ကို
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အရာရာ ထူးချွန်ထက်မြက်သူတစ်ယောက်အဖြစ် သူ
စံထားခဲ့ပါသည်။ သူတင်မက ကျောင်းသားကျောင်းသူ တော်တော်များများလည်း
ဆရာ့ကို စံထားရလောက်သည်အထိ ဆရာက ဘက်စုံ ထူးချွန်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ တစ်နေ့ ဆရာ့လိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားမည်ဟု
သူစောင့်နေခဲ့သော်လည်း အဲဒီ့နေ့က ဆရာ.. မလာခဲ့ပါ။ နောက်ဘယ်တော့မှလည်း
ဆရာ ကျူရှင်ကို မလာတော့ပါချေ။ ဆရာ ကျူရှင်က
ထုတ်ပယ်ခံရသည်ဟုကြားရတာကလွဲရင် တခြားဘာမှ သေချာမသိရခဲ့ပေ။ နောက်တစ်နေ့
ဘိုင်အိုဆရာနှင့် မြန်မာစာ ဆရာမ တို့ တီးတိုး ပြောသံကို
သူနားစွင့်လိုက်မှ ဆရာ၏ အိမ်စာပေးမည့်စာရွက်ထဲတွင် The Advantages of a
Homo ဆိုတဲ့ Essay ခေါင်းစဉ် ကိုတွေ့လို့ ကျူရှင်ဝိုင်းမှ
ထုတ်ပယ်လိုက်ရသည် ဟု သူကြားလိုက်ရပါသည်။
ဟိုမို ဆိုသော စကားလုံးကို သူအဲဒီ့မှာ စကြားဖူးတာဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ့ကိုကား
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက်ပိုင်း သူပိုပြီး ရင့်ကျက်လာသလို
သူ့ကိုယ်သူထင်မိပါသည်။ အရာရာကို သူခွဲခြား ဆင်ခြင်လာနိုင် ပါသည်။
ကျောင်းပြီးပြီးချင်း စိတ်မလေနေစေရန် အမေက သူ့ကို အလုပ်တစ်ခုပေးသည်။ အမေက
Giffarine အလှကုန်မှာ member ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် Giffarine product
များကို အသိမိတ်ဆွေများထံ လိုက်ပြီးပြသ ရောင်းချသည်။ အစပိုင်းက
အမေ့နောက်က ပစ္စည်းများ ဝိုင်းဝန်းသယ်ယူပေးရုံ လိုက်ပေးရခြင်း
ဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်း အမေက သူ့ကို ပစ္စည်းများ၏ အာနိသင်နှင့်
ဈေးနှုန်းများ ကို ပြောပြကာ သွားနေကျ အသိများဆီ ဝင်ထွက်ရောင်းချစေလေသည်။
မပင်ပန်း မခက်ခဲသော နီးစပ်ရာ အလုပ်တစ်ခုကို အမေကရွေး
တစ်ရက်.. Giffarine အလှကုန်များထည့်ထားသော အိတ်ကိုကိုင်ပြီး သူပြန်အလာ၊
လမ်းထဲဝင်ဝင်ချင်းပင် ခလုတ်တိုက်ပြီး အိတ်ထဲမှ အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ချို့
လမ်းမပေါ်သို့ ထွက်ကျကုန်သည်။ ပစ္စည်းများကို သူပြန်ကောက်နေဆဲ လမ်းထိပ်တွင်
ညနေစောင်း ဆို ထိုင်နေကျဖြစ်သော ရွယ်တူလူငယ်တစ်အုပ်၏
'အခြောက်ကြီး' …. တဲ့။
ထိုအဖွဲ့ထဲမှ တစ်ယောက်က စူးစူးဝါးဝါးထအော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုစကားလုံးကို စတင် အသုံးနှုန်းခံလိုက်ရခြင်းနှင့် အတူ သူ့ရင်ထဲတွင်
စူးရှသော အရှက်တရားကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားလိုက်ရပါသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး
တဆတ်ဆတ်တုန်သည် အထိ ဒေါသ မှန်းမသိ၊ ရှက်တာမှန်းမသိ ဖြစ်သွားမိသည်။
သို့ရာတွင် အမေ့ဆုံးမစကားတွေကို အမြဲမှတ်မိနေသည့်အတွက် သူရန်ကိုရှောင်ကာ
ထိုနေ့ညက တွေဝေစွာ ထိုင်တွေးနေရင်း သူအိပ်မပျော်ပါ။ သူ့မျက်စိထဲတွင်
ငယ်စဉ်က သူတို့ ဝိုင်းဝန်းရယ်မောခဲ့သည့် ရှောက်သီးဆေးပြားသည်
အခြောက်များကို မြင်နေမိပါသည်။ သူ့ကိုရော?... တခြားသူတွေက ထိုကဲ့သို့
မြင်နေသည်လား။ ဒါမှမဟုတ် ထိုရှောက်သီးဆေးပြားသည်များလို သူ.. အမြဲ
အခြောက်များ အဘယ့်ကြောင့် တည်ရှိနေပါသနည်း။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဲ့သို့
ပြုမူနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် အတွက် အခြောက်အဖြစ်နေထိုင်နေကြခြင်းလား။
ထိုအတိုင်းသာဆိုရင် အခြောက်အဖြစ်နှင့်ဆိုလျှင် ဘဝကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ
နေထိုင်နိုင်ခြင်းလား။ အခြောက်ဆိုသည်မှာ သာမာန်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ 'အခြောက်'ဟု ခေါ်ခံလိုက်ရသည်နှင့်
ဘယ်လောက်ထိ ကွာခြားသွားသလည်း။ အခြောက်ဟု အခေါ်ခံရသူတစ်ယောက်မှာ
သာမာန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ထက် နိမ့်ကျသွားသည်လား၊ စွမ်းရည်ဆုတ်ယုတ်သွားသည်
လား၊ အရေးအရာမဝင်တော့သည်လား။ သေချာတာကတော့ ပိုပြီး မြင့်တက်သွားသည်ဟု
တွေးရင်း အတွေးတို့က ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာပါသည်။ ထိုညက ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော
သေချာတာက သူ.. ခါးသီးစွာပင် အခြောက်တစ်ယောက် မဖြစ်ချင်ခဲ့ပါ။
တက္ကသိုလ်စတက်တော့ အဖေက သူ့ကို dictionary စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ပေးပါသည်။
စာမျက်နှာ နှစ်ထောင်ကျော်ရှိသဖြင့် အတော်အသင့်ထူသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဟု
ပြော၍ရသည်။ စာအုပ်ရရခြင်း သူဘယ်စာလုံးကိုရှာဖွေရကောင်းမှန်း မသိသေးပါ။
စာအုပ် ကိုသာ လှန်လှောရင်း စိတ်ဝင်စားစရာ စာလုံးတွေကိုသာ ကျက်နေလိုက်သည်။
တစ်ရက် ကျောင်းရဲ့ အိမ်သာထဲမှာ ရေးထားသော `ဟိုမို တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝက
မလွယ်ပါဘူး။ ပိုပြီး သတ္တိရှိရပါတယ်။ ပိုပြီး ရင်ဆိုင်တတ်ရတယ်..'
ဟုရေးထားသော စာလုံးများကိုတွေ့ရမှ ငယ်စဉ်က ဆရာ့၏ Essay ခေါင်းစဉ်မှ
ဟိုမိုဆိုသောစကားလုံးကို ရှာဖွေ ကြည့်ရန် သူသတိရမိပါသည်။ H နှင့်စသော
စာလုံးများကို ရှာဖွေရင်း တစ်နေရာမှာ homo ဆိုသော
Homo /ဟိုမို/ n. (pl.-s) colloq. offens. - လိင်တူခြင်း စပ်ယှက်သော တဲ့…………..။
သူစာအုပ်ပင်လွတ်ကျသွားသည် အထိ အံ့အားသင့်မိသွားပါသည်။ ဆရာ…….။ ဆရာက
ဘာ့ကြောင့် လိင်တူဆက်ဆံသူများရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရေးခိုင်းဖို့
စဉ်းစားခဲ့ပါသနည်း။ ဆရာက ဟိုမိုတစ်ယောက်လား။ ကျောင်း အိမ်သာထဲမှာ
စာရေးသွားသူကရော ? ကျောင်းသားတွေထဲမှာရော ဟိုမိုတွေရှိနေတာလား….။
လိင်တူခြင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ ဟိုမိုတွေဟာ အခြောက်..၊ အခြောက်တွေ လား……..။
Homo ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သူ့ရင်ထဲတွင် မေးခွန်းများစွာ
တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အဖြေမရှိသော မေးခွန်းများစွာ ဖြင့် homo
သူ Homo ဆိုတာကို အရမ်း စိတ်ဝင်တစားရှိလာခဲ့ပါသည်။
သူ့မှာ ငယ်စဉ်ထဲက ပေါင်းသင်းလာခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည်။
မူလတန်းထဲက အတူသွား အတူစား ပေါင်းသင်းလာ ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သဖြင့်
သူတို့နှစ်ဦး အရမ်းကို ခင်တွယ်ကြပါသည်။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့မှ
ကွဲသွားကြတာဖြစ်သော်လည်း သူငယ်ချင်းက သူ့ဆီကို အမြဲလာလည်လေ့ရှိသည်။
လာလည်တိုင်းလည်း ရယ်စရာအမြဲပြောတတ်သော သူငယ်ချင်းကြောင့် သူအမြဲ
ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါသည်။ ဖော်ရွေပြီး အမြဲ သူ့အပေါ်နားလည်ပေးတတ်တဲ့
သူငယ်ချင်းဖြစ်သဖြင့် သူတို့နှစ်ဦးတွေ့ရင် ရန်ဖြစ်ရတယ်ဟူ၍ မရှိပေ။
တစ်နေ့ သူငယ်ချင်း အိမ်ရောက်လာပေမယ့် အရင်လို လန်းလန်းဆန်းဆန်း မရှိပေ။
တစ်စုံတစ်ခုကို တွေဝေငေးမောနေပြီး စိတ်နဲ့လူနဲ့ မကပ်သလိုဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။
အမြဲရွှင်ရွှင်လန်းလန်းရှိနေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေတာကို
သူလုံးဝမနေတတ်ပါ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ပခုံးကို ခပ်ဖွဖွလေးဖက်ရင်း
သူဖက်ပြီးမေးလိုက်မှပဲ သူငယ်ချင်းက ငိုပါတော့သည်။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်
ငိုတာကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးခြင်းနှင့် အတူ၊ အမြဲပျော်ရွှင်နေသော သူငယ်ချင်းက
ငိုတယ်ဆိုတာကို သူအရမ်း ထိတ်လန့်သွားမိပါသည်။ သူငယ်ချင်းကို
သူပွေ့ဖက်ထားရင်း နူးညံ့စွာ မေးလိုက်ပါသည်။
သက်ပိုင်က သူ့ကိုမှီကာ ခေါင်းကို ငုံ့ထားရင်း တိုးညှင်းသော အသံဖြင့်ပြောပါသည်။
"HM တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝက မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်တယ် ဝေလင်းရာ….။"
သူမသိသော စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သဖြင့် သူမေးခွန်းပြန်ထုတ်လိုက်ပါသည်။
ပြန်မေးလိုက်သည့် ချက်ခြင်းပင် သူ့ခေါင်းထဲ စကားလုံးတစ်လုံးဝင်လာပါသည်။
"HM ဆိုတာ homo ကိုပြောတာလား သက်ပိုင်….။"
သက်ပိုင်က သူ့ကို အလန့်တကြားမော့ကြည့်ပါသည်။
"မင်း.. ဘယ်လို..၊ ဘယ်လို သိနေတာလည်း။ ဝေလင်း……..။"
မှန်သွားခဲ့ပါပြီ။ သူစိတ်ထဲ တအားရှုပ်ထွေးသွားမိသည်။ သက်ပိုင်က
သူနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာ သူအလွန် စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့သော
ဟိုမိုတစ်ယောက်ရှိနေတာ သူမသိခဲ့ပေ။ ဟိုမိုတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝတွင်
သက်ပိုင်တစ်ယောက် ဘာများ ပြောင်းလဲ သွားလည်းဆိုတာ သူသေချာစွာ
ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်သော်လည်း သက်ပိုင်က အရင်ကအတိုင်း မပြောင်းလဲပေ။
သက်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့် မပြောလျှင် သူဟာ ဟိုမိုတစ်ယောက်ပါလို့
သူကိုယ်တိုင်ပင်မပြောနှင့် မည်သူမှ သိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
"ငါ ခန့်မှန်းပြောလိုက်တာပါ.. သက်ပိုင်ရာ…။"
သက်ပိုင်က ခေါင်းကို ငုံ့ထားပြီး ခပ်တိုးတိုးထပ်ပြောပါသည်။
"မင်း.. ငါ့ကို အထင်သေးမှာလားဟင်….။"
သူ သက်ပိုင်ရဲ့ အပြုအမူကိုကြည့်ပြီး အရမ်းသနားသွားမိပါသည်။
လိင်တူဆက်ဆံသူတစ်ယောက် ဖြစ်တာနဲ့ အခင်ရဆုံး သူငယ်ချင်းအပေါ်
အထင်အမြင်သေးရအောင်၊ နှိမ့်ချဆက်ဆံရအောင် သူ့စိတ်ဓာတ်တွေ မနောက်ကျိသေးဟု
"မဆိုင်တာပဲ သူငယ်ချင်းလေးရယ်။ မင်းအဲဒီ့လိုပြောလိုက်လို့ ငါ့စိတ်ထဲ
ဘာအရောင်မှ မပြောင်းလဲသွားပါဘူး။ မင်းဘာတွေဖြစ် လာတာလည်းဆိုတာပဲ ငါ့ကို
သက်ပိုင်က သူ့ကို ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသလိုလို၊ ကျေးဇူးတင်သလိုလိုဖြင့်
ဝေခွဲမရစွာ ကြည့်ရင်း မျက်ရည်စများကို သုတ်ပြစ်ကာ စပြောပါသည်။
"ငါ ဟိုမိုတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ ဝေလင်း….။"
"ငါ့ကိုယ်ငါ ဟိုမိုလို့ ခံယူလိုက်ထဲက ငါ.. ယောက်ျားလေးတွေအပေါ်သာ အရင်ကထက်
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားရဲလာခဲ့တယ်။ အထူး သဖြင့် ငါက အသားဖြူဖြူနဲ့ ချောတဲ့
သက်ပိုင်က ပြောနေရင်း ရှက်သွားသလိုဖြစ်ကာ သူ့ကို တစ်ချက် အကဲခတ်ပြီး
ကြည့်လိုက်သည်။ သူက ဘာမှ မထူးခြားသလို နေမှန်း တွေ့ရမှ ဆက်ပြောပါသည်။
"ငါ့ ဟိုမိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိတ်ဆက်ပေးလို့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့
ငါရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ကောင်လေးက ဖြူဖြူချောချောလေးဆိုတော့
ငါတအားသဘောကျခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ ရင်းနှီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူကပြောတယ်။
သူအိမ်ပေါ်က ဆင်း လာတာ နေစရာမရှိဘူးတဲ့။ အခုဆို
သုံးစရာပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးတဲ့။ ပြောရရင်ကွာ ငါက အဘိုးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲ
နေတာဆိုတော့ သူ့ကို အိမ်ကိုခေါ်ထားခဲ့မိတယ်။ ငါသူ့ကိုခေါ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာ
ငါသူ့အပေါ် သဘောကျရုံသပ်သပ်ခေါ်ထားခဲ့တာပါ။ သူအနားမှာ ရှိနေရင်၊
သက်ပိုင်က စကားပြောရင်းရပ်နားကာ သူ့ကို တစ်ချက်တစ်ချက် အကဲခတ်သလိုကြည့်ပါသည်။
"ငါနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် သက်ပိုင်။ ဆက်ပြောပါ….။"
သူက နားလည်ပေးနိုင်သော အပြုံးနှင့် သက်ပိုင်၏လက်မောင်းကို ပုတ်ပြီးပြောမှ
"ငါသူ့ကို ယုံကြည်ခဲ့၊ ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမယ့် သူ….. ငါ့အပေါ်
မကောင်းခဲ့ဘူးကွာ။ ငါစုထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေရော ငါ့ရဲ့ laptop ကိုပါ
သူယူသွားခဲ့တယ်။ သူအစအနပျောက်သွားခဲ့တယ် ဝေလင်းရာ….။"
ပြောရင်း သက်ပိုင် မျက်ရည်ထပ်ကျသည်။ သူသက်ပိုင်ကို ပွေ့ဖက်ထားရင်း
နှစ်သိမ့်နေလိုက်ပါသည်။ သက်ပိုင်က တစ်ချက် ရှိုက်လိုက်ကာ ပြောပါသည်။
"ဟိုမိုတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဟာ.. အဲလိုပဲလားမသိပါဘူးကွာ။ လူတွေရဲ့ အနိုင်ယူတာကို………။"
သူစကားကို ဖြတ်ပြောလိုက်သည့်အတွက် သက်ပိုင်ပြောလက်စ
စကားများရပ်တန့်သွားကာ သူ့ကို မော့ကြည့်လေသည်။
"ဟိုမိုတစ်ယောက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထားနူးညံ့တဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို လူတွေက
နိုင်ကွက်ရှာပြီး အနိုင်ယူချင်ကြတာပဲ။ လွယ် ရင်သူကြွယ်တောင်မနေဘူးလို့
ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ သက်ပိုင်ရဲ့ ယုံကြည်လွယ်မှုကို သူက
အခွင့်ကောင်းယူသွားတာပါ။ ဒါဟာ သက်ပိုင်မှ မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ဖက်သားအပေါ်
ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ အခြားတစ်ယောက်၊ ယုံလွယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဒါမျိုးဖြစ်မှာပဲ။ သက်ပိုင် ပြောတာကိုနားထောင်ပြီး သက်ပိုင်နေရာမှာ
ငါ့ကိုယ်ငါ အစားထိုးတွေးကြည့်တယ်။ ငါသာဆိုလည်း ကူညီခဲ့မိမှာပဲ
သက်ပိုင်..။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဟာ ဟိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီလို
အနိုင်ယူခံရတယ်ဆိုတာမျိုး စိတ်ထဲမတွေးပါနဲ့။ ဒါက လူ့လောကမှာ ဖြစ်နေကျ လူ
လူချင်း လှည့်စားအနိုင်ယူတဲ့ ကိစ္စတွေပဲလေ။ ငါ ဟိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့
ဒီလိုတွေဖြစ်နေရပါလားလို့တွေးမယ့် အစား ဒါကို ငါသင်ခန်းစာ ယူရမယ်လို့
သူ့စကားများက သက်ပိုင်၏ အသွေးအသားထဲ အားအင်များအဖြစ်
စီးဆင်းသွားသည်လားမသိ၊ သက်ပိုင်၏မျက်လုံးများထဲတွင် မှုန်မှိုင်းသော
အရိပ်အယောင်များ ရုတ်ချည်း ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ပါသည်။
သက်ပိုင်က တုန်ယင်သော အသံဖြင့်ပြောကာ သူ့အား တင်းကျပ်စွာ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပါသည်။
"ကျေး.. ကျေး.. ဇူးတင်လိုက်တာ သူငယ်ချင်းရယ်…………..။ ငါတဒင်္ဂ
စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားမိတယ်။ ငါ့ကို နားလည်ပေးတာ တအား……. ကျေးဇူး..
သူကိုယ်တိုင်ပင် မျက်ရည်များဝဲလာသည်အထိ သက်ပိုင်၏ အသံများက သူ့ရင်ကို
လှုပ်ရှားသွားစေခဲ့ပါသည်။ သေချာတာက ဟိုမိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို
အဲနေ့ညက သက်ပိုင်တော်တော်မိုးချုပ်မှ ပြန်သွားပါသည်။ သက်ပိုင်က မပြန်ခင်
သူ့ကို ခင်သေးရဲ့လားလို့ မေးသွားခဲ့သေး သည်။ ဟိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့်
မခင်တော့မှာကို သက်ပိုင်စိုးထိတ်နေသည်ထင်သည်။ သူ သက်ပိုင်ကို နားလည်စွာ
ကြည့်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြခဲ့သည်။ သူတကယ်လည်း သက်ပိုင်ကိုခင်ပါသေးသည်။
သက်ပိုင်ပြန်သွားတော့ တော်ရုံနဲ့ သူအိပ်မပျော်သေးပေ။ ဆယ်တန်းတုန်းက
ဆရာ့အကြောင်းကို သူပြန်စဉ်းစားမိသွားပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဆရာ့ရဲ့
မေ့မရနိုင်လောက်အောင် အစစအရာရာတွင် ထက်မြက်နေခြင်းများကို သူသတိရမိသည်။
ဆရာက စာသင်တာ အရမ်းကောင်းပါသည်။ စာသင်သည့်အခါ နားဝင်အောင်သင်တတ်သည်။
ဆရာ့အချိန်ဆိုလျင် အိပ်ငိုက်သည့်ကျောင်းသားဟူ၍ မရှိပေ။ စာသင်ရင်း
စိတ်ဝင်စားစရာများ၊ ရယ်ရွှင်စရာလေးများကို ကြားညှပ်ပြောသွားတတ်သဖြင့်
ဆရာစာသင်သည်မှာ စာသင်သည်နှင့်မတူပဲ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်နေရသည်နှင့်
ပိုတူနေပါသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောပြ သောကြောင့် ဆရာက
ဘွဲ့သုံးခုရထားသည် ဟုပင် ကြားဖူးပါသည်။
ဆရာက ထက်မြက်ရုံတင်မက ဖြတ်ထိုးဥာဏ်လည်း တအားကောင်းသည်။ တစ်ခါက ကျောင်းမှာ
ဝန်ကြီးလာမယ့်အချိန် မိန့် ခွန်းပြောမယ့် စင်ပေါ်မှာတင်စရာ အလှပန်းခြင်း
မစီစဉ်မိတာနှင့် ကြုံရသည်။ ကျောင်းဝန်းထဲမှာ ပေါက်နေတဲ့ပန်းများကလည်း
စက္ကူပန်း များဖြစ်သဖြင့် ပန်းထိုးရန် အဆင်မပြေပေ။ အချိန်နီးမှ
သတိထားမိသည့်အတွက် အားလုံး ခေါင်းမီးတောက်နေသည့်အချိန်တွင် ဆရာက
ထိုအခက်အခဲကို အေးဆေးစွာ ကူညီနိုင်ခဲ့လေသည်။
ဆရာက ရွှံ့များကို ခပ်ကြီးကြီးလုံးကာ ရွံ့လုံး၏အောက်ပိုင်းကို
ချထားလို့ရအောင် ပြားလိုက်သည်။ စိမ်းစိုသန့်ရှင်းသော မြက်ပင်
ရှည်ရှည်များကို ထိုရွံ့လုံးထဲ ခပ်စိပ်စိပ် စိုက်လိုက်သည်။
မြက်များကြားတွင် သစ်ရွက်ဖယ်ပြီးသား စက္ကူပန်းအနီများကို ထိုးထိုး ထောင်
ထောင်ဖြစ်နေအောင် ထိုးပါသည်။ ထို့နောက် ရေစက်လေးများဖြင့်
လေးကြားတွင် စက္ကူပန်းနီများ ခပ်ကျဲကျဲပေါ်နေသည်မှာ အလှပန်းခြင်းများထက်ပင်
ပို၍ အမြင်ဆန်းကာ အလွန်ပင်ကြည့်ကောင်းနေ လေသည်။
ထိုမြက်ခင်းလုံးများနှင့်ပင် ဆရာက မိန့်ခွန်းစင်ကို အလှဆင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
တစ်ခါကလည်း ကျောင်းက ဝတ်ရွတ်သည့် ကျောင်းသူအသင်း ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့
ကျောင်းမှ ထွက်ခါနီးမှ ဆံပင်များကို တူညီထုံးဖွဲ့ရန် စဉ်းစားမိကြသည်။
ကျောင်းမှဆရာ၊ ဆရာမများက ဆံထုံးလေးတွေတူညီထုံးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်လို့
စဉ်းစားမိသော်လည်း ဆံပင်တို သည့် ကျောင်းသူများအတွက် အဆင်မပြေနိုင်သဖြင့်
ထိုအစီအစဉ်ကို လက်လျော့ထားလိုက်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆရာက အနီး အနားမှ
ပင်ပေါင်ဘောလုံးလေးများ သွားဝယ်လာကာ ဆံပင်တိုသည့်ကျောင်းသူများအတွက်
ဆံပင်အထဲမှ ပင်ပေါင်ဘောလုံးများခံကာ ဆံထုံးထုံးရန် အကြံပြုခဲ့လေသည်။
ဆင်တူဆံထုံးများထုံးနိုင်သွားကြပါသည်။ဆရာ့၏ ပင်ကိုယ် စွမ်းရည်များ၊
ထက်မြက်မှုများ၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်များသည် ကျောင်းသား၊
ကျောင်းသူများပေါ်တွင်မကပဲ ကျောင်းအတွက်ပါ အကျိုးရှိခဲ့လေ သည်။
ရုတ်တရက် သူစဉ်းစားမိသည်က ဆရာ့လို တော်တဲ့သူတစ်ယောက်က ဘာ့ကြောင့်
ဟိုမိုဖြစ်နေရပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့် လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့
သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရပါသနည်း။ ဆရာဟာ ယောက်ျားချင်းကိုမှ ဘာ့ကြောင့်
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဆရာ့မှာ အပြစ်ရှိသည်ဟုလည်းပြော၍မရ။
ဟိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာ အပြစ်ရှိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ဟု သူ
ထင်မြင်မိပါသည်။ အပြစ်ရှိသည်ဆိုလျှင် ဆရာသိမ်ငယ်နေရမှာ၊ အပြစ်အတွက်
ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရမှာဖြစ်သည်။ အခုတော့ ထိုကဲ့ သို့ မဟုတ်ပေ။ ဆရာက
အရာရာတွင် တော်လွန်းနေသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိနေခဲ့ပါသည်။
သူ.. ငယ်စဉ်က အဖြေရှာမရခဲ့ သည့် မေးခွန်းတစ်ခု၏ အဖြေကို ဆရာ့ကိုကြည့်ရင်း
သူဖြေလိုက်နိုင်ပါသည်။ ဟိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်တာနှင့် သာမာန်ယောက်ျား
တစ်ယောက်ထက် ပိုပြီး နိမ့်ကျမသွားပါ၊
ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်က တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ် သွားခြင်း
ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သူ.. ယုံကြည်လိုက်မိပါသည်။
ဆရာက သူ့ကို ကြိုးစတစ်စ ကမ်းပေးသည်။ အနီရောင် ကြိုးစလေးတစ်စဖြစ်သည်။ သူ..
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ ထိုကြိုးစလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည်။
သူတစ်ခုခုကို မေးလိုက်မည်ဟု ကြံစည်လိုက်ချိန်တွင် ဆရာက သူ့ကို ကြည်လင်စွာ
တဖြည်းဖြည်း ဝေ…… ဝါး…….စွာ………..။
ဟိုမိုဟု ဝန်ခံလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သက်ပိုင်က သူ့ကို
ဟိုမိုကိစ္စများနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး ရင်ဖွင့်လာပါတော့သည်။ သူထင်ခဲ့သော
ဟိုမိုတစ်ယောက်ဟာ ဘဝကို သာမာန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဲ့သို့
နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဟိုမိုတစ်ယောက်ကဲ့သို့ တည်ရှိနေပါသည် ဆိုသော
အတွေးသည် သက်ပိုင်၏ စကားများကိုနားထောင်ရင်း တဖြည်းဖြည်း
လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သက်ပိုင်မှာ ယောက်ျား
ချင်းစိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ငယ်စဉ်က သူတွေ့ခဲ့ဖူးသည့်
ရှောက်သီးဆေးပြားသည် အခြောက်များလို မိန်းမဆန်ခြင်း မျိုးမရှိပေ။
သာမာန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ပြုမူနေထိုင်ပါသည်။ သက်ပိုင်
ပြောပုံအရဆိုရင်တော့ ဟိုမိုစကားနှင့် 'အပုန်း' ဟုခေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သက်ပိုင်ပြောပြသဖြင့် ဟိုမိုလူတန်းစားများသည် အလုပ်ကိုင်မျိုးစုံ၊
နေရာမျိုးစုံနှင့် ရာထူးဂုဏ်ရှိန်မျိုးစုံတို့တွင် တည်ရှိနေကြောင်း
သိရသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ သက်ပိုင်ပြောပြသူများထဲတွင် လုံးဝထင်ရက်စရာမရှိသော
သူ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ်ချို့ပင် ပါနေသေးပါ သည်။ သူ ထူးခြားစွာ
အံ့သြသွားခြင်းတော့ မရှိခဲ့ပေ။ ဆရာကိုယ်တိုင်ပင် ထက်မြက်သော
သက်ပိုင်ပြောသော ဟိုမိုများအကြောင်းကို နားထောင်ရသည်မှာ
များသောအားဖြင့် ရယ်စရာများက များနေသည်။ သက်ပိုင်က အစောကြီးထဲက ရယ်စရာ
တအားပြောတတ်သူဖြစ်သည့်အပြင် ဟိုမိုများ၏ ဟာသဥာဏ်ရွှင်မှုများကို
အမူအရာနှင့်ပါ ပြန်လည်လုပ်ပြ တတ်သဖြင့် သူ.. အူလိမ့်နေအောင်ကို
ရယ်ရပါသည်။ တဖြည်းဖြည်းဖြင့် သူသိလာသည်က ဟိုမိုများသည်
သူတပါးစိတ်ချမ်းသာအောင် ပညာသားပါပါနှင့် ရယ်စရာပြောတတ်သည်၊
ပျော်အောင်အမြဲနေတတ်သည်၊ စကားအရာတွင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသည်။ ဝက္ကဝုတ္တိအလင်္ကာ၊
မြည်သံစွဲအလင်္ကာ၊ အတိဿယဝုတ္တိအလင်္ကာ စသည်များကို ပိုင်နိုင်စွာ
ထည့်သွင်းအသုံးပြုကာ ဟာသမြောက်အောင် ပြောဆိုနိုင်သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
သက်ပိုင်ပြောသလို ဟိုမိုတွေ တစ်ဖွဲ့ကြီးတွေ့ရသည်တော့
ဘယ်လိုများနေလိမ့်မလည်းမသိပေ။ သက်ပိုင်တစ်ယောက်ထဲနဲ့တင် သူတော်တော်ကို
ဟိုမိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပေါင်းသင်းရခြင်းကို သူပိုပြီးနှစ်
သူတစ်ခါက တွေးခဲ့ဖူးသော ဟိုမိုတစ်ယောက်… ခါးသီးစွာ
စာမေးပွဲနီးလာပြီဖြစ်သဖြင့် သူငယ်ချင်းများ စာစုကျက်ရန် စီစဉ်ရပါသည်။
အထက်တန်းတုန်းက အဘိုးနှင့် နှစ်ယောက်ထဲနေ သော သက်ပိုင်အိမ်တွင် ညအိပ်ကာ
စာကျက်ဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းချင်းမတူသဖြင့် သက်ပိုင်ကို ဒုက္ခမပေးချင်ပေ။
ပြီးတော့ သူနား မလည်သည့် အပိုင်းတွေကို ရှင်းပြဖို့
တစ်ဦးထဲကျက်ခြင်းထက်ပိုထိရောက်သည် ဟု ထင်မိသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်မှာ
သူထင်ထားခဲ့သလို စာစုကျက်တဲ့ အစီအစဉ်က အဆင်မပြေပါ။ သူ့သူငယ်ချင်းများက
သူ့အိမ်ကိုညအိပ်လိုက်ပြီးစာကျက်ရန် မိဘများက ခွင့်မပြုသည့်အပြင်
သူတို့ကိုယ်စီ၏အိမ်များသို့လည်း ခေါ်ဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေကြသည်။
သူတစ်ယောက်ထဲစာကျက်လျှင် အဆင်မပြေနိုင်သောကြောင့် သူစိတ်ညစ်နေမိပါသည်။
သူစိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အတန်းထောင့်က ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီး ပြတင်းပေါက်မှ
အပြင်ကို ငေးနေမိဆဲတွင် စူးရှချိုမြိန်သော ရေမွှေးရနံ့ တစ်ခုကို
ဘေးနားမှရရှိလိုက်ပါသည်။ သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အတန်းထိပ်ဆုံးတွင်
ထိုင်လေ့ရှိသော ကောင်လေးဖြစ်ပါသည်။ ထို ကောင်လေးကို သူအစက
အနည်းငယ်တော့သတိထားမိပါသည်။ သူ့ကြည့်ရသည်မှာ မည်သူနှင့်မှ
သေချာစွာပေါင်းသင်းခြင်းမရှိပဲ သီးခြားဆန်နေသည်ဟု ထင်ရပါသည်။
အရပ်ရှည်ရှည် မဖြူမညိုလေးနှင့် သူ့မျက်နှာက ချောတဲ့ဘက်ရောက်သဖြင့်
ကောင်လေးက ချိုရှစွာ ပြုံးပြလျှက် သူ့ကိုစကားစပြောပါသည်။
"ဟာ ဟုတ်လား။ အေးကွာ ငါစာအတူကျက်ရမယ့်အဖော်မရှိတာနဲ့အတော်ပဲ။ မင်းငါနဲ့
အတူစာလိုက်ကျက်လို့ရမလား။ ငါမပိုင် တဲ့ ဘာသာတွေရှိနေတယ်ကွ။ ပြီးတော့
ငါဂုဏ်ထူးလိုချင်သေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ငါတစ်ယောက်ထဲအဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး။
မင်း ငါ့အိမ်မှာစာလိုက်ကျက်နိုင်မလား။ သြော် by the way, ငါ့နံမည်က
"ငါနံမည်က ဝေလင်းပါ။ ငါလည်း စာကျက်ဖို့အဖော်ရှာနေတာနဲ့ အတော်ပဲကွ။ Ok လေ
လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ချိန်တွင် ထူးခြားစွာ ကျော်ဇင်လတ်၏ လက်များက
နူးညံ့လွန်းနေတာ သတိထားမိသွားပါသည်။ အရင်က တခြားသူများနှင့်
လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည့်အခါတိုင်း သူ ထိုကဲ့သို့သတိထားမိခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ကျော်ဇင်လတ်၏ လက်တွေကတော့ သတိထားမိရလောက်အောင် ထူးခြားစွာ နူးညံ့နေပါသည်။
သူ့ဘဝတွင် လိင်တူယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ဦးစွာ
ခံစားမိခြင်းနှင့် အတူ.. ကျော်ဇင်လတ်တစ်ယောက် သူ့ ဘဝထဲ သူမထင်မှတ်ခဲ့သော
ကိုလတ်က နယ်ကကျောင်းလာတက်ရတာဖြစ်သဖြင့် တစ်ဦးထဲ
တစ်ယောက်ထဲနေသူဖြစ်သည့်အတွက် စာကျက်သည်ကိုနှောင့်ယှက်မည့်သူ မရှိပေ။
ထို့ကြောင့် အစပိုင်း ညနေပိုင်းများမှသာ ကိုလတ် ဆီ
သူစာသွားကျက်ဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းပိတ်သွားတာနဲ့ မနက်ပိုင်းရော
ညနေပိုင်းပါ ကိုလတ်ဆီ သူစာသွားကျက်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ရက်.. စာအတူကျက်နေရင်း အတော်လေးကိုမိုးချုပ်သွားသည်။ ကိုလတ်က
သူ့အခန်းမှာပဲ နေလိုက်ပါတော့ဟု ဆိုသဖြင့် သူအိမ်မပြန်ဖြစ်တော့ပါ။
ညပိုင်းစာကျက်တာပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား TV ကြည့်ရင်း
စကားစမြည်ပြောဖြစ်ကြသည်။ စကားပြောရင်း ကိုလတ်က တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့ကို
ငေးငိုင်စွာ ကြည့်လေသည်။ ထို့နောက် သူ့ကို ထူးဆန်းသောစကားတစ်ခု
"မင်း နမ်းဖူးလား ဝေလင်း" တဲ့…….။
သူခေါင်းကို ခါရမ်းလိုက်မိသည်။ ကိုလတ်က သူ့ပုံအတိုင်း ချိုရှစွာ
ပြုံးရင်း 'ငါသင်ပေးမယ်' ဟုပြောကာ သူ့နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ရုတ်တရက်
သူရုတ်တရက် မင်တက်မိသွားကာ ဘာပြန်တုံ့ပြန်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် ကိုလတ်၏ နမ်းရှိုက်မှုကို သူမရုန်းမိ ပေ။ ငတ်မွတ်စွာ
နမ်းရှိုက်နေသော ကိုလတ်၏ ပြင်းထန်သော အနမ်းများထဲတွင် ငြင်သာစွာ
အလိုက်သင့်မြောပါရင်း ရင်ထဲကျေနပ်နေ သလိုလို……။
ဟာ… ငါ……. ငါ…………..။ ငါသာယာမိတယ်ဆိုတာ………………။
သူ ကိုလတ်ကို ရုတ်တရက် တွန်းဖယ်လိုက်မိပါသည်။ ထို့နောက်သေချာစွာ
"မင်း ဟိုမိုတစ်ယောက်လား ကိုလတ်။"
ကိုလတ်က ခေါင်းကိုငုံ့ကာ ပြောပါသည်။
"အေး ဟုတ်တယ်.. ဝေလင်း….. ငါဟိုမိုတစ်ယောက်ပါ………..။ ငါမင်းကို သဘောကျတယ်
ဝေလင်း။ မင်းကို နမ်းရှိုက်ရတာကိုလည်း ငါနှစ်သက်မိတယ်…။"
ကိုလတ်အပေါ်နမ်းရှိုက်ရခြင်းကို နှစ်သက်မိသွားခဲ့သည်မဟုတ်လား..။ ဒါ..
ဒါဆို…… သူကိုယ်တိုင်ဟာလည်း ဟို.. မို……. တစ်.. ယောက်…..။
ရှုပ်ထွေးခြင်းများဖြင့် သူခေါင်းကို တွင်တွင်ခါယမ်းကာ ကိုလတ်၏
တိုက်ခန်းထဲမှ ပြေးထွက်ခဲ့ပါသည်။ နှုတ်ဆက်စကားပင် မဆိုမိ..။ ထိုညက
လမ်းမပေါ်တွင် တစ်ယောက်ထဲ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်သွားရင်း သူ့ကိုယ်သူ
လိင်တူယောက်ျားလေးတစ်ဦးကို သူ သဘောကျတတ်နေပြီလား။ သေချာ တာက ကိုလတ်နှင့်
ထိတွေ့ခဲ့ရခြင်းကို သူနှစ်သက်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဟိုမိုတွေကို သူနားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း သူ့ကိုယ်သူ
ဟိုမိုတစ်ယောက်အနေနှင့်တော့ လက်ခံနိုင်ရန် ခဲယဉ်းနေပါသေးသည်။ သူ့ဘဝရဲ့
ပထမဆုံးရည်းစားဦးဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလိမ့်မည်ဟု သူဘယ်တုန်းကမှ
မတွေးကြည့်မိဖူးခဲ့ပေ။ သည့်အတွက် လူတွေရဲ့ ရှုံ့ချကဲ့ရဲ့မှုကို
အတွေးများစွာဖြင့် သူ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရင်း
ကြယ်တွေကိုငေးမောနေလိုက်မိပါသည်။ ဓူဝံကြယ်၊ မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်း ကြယ်၊
ခုနစ်စဉ်ကြယ် စသည်ဖြင့် နံမည်ရှိသော ကြယ်လေးများက သူ့နေရာနှင့်သူ
တောက်ပနေကြပါသည်။ နံမည်မရှိသော ကြယ်တွေ ထဲမှ ခပ်မှိန်မှိန်
ကြယ်လေးတစ်လုံးကို ရွေးချယ်ကာ သူငေးမောနေလိုက်မိသည်။ ခဏကြာတော့
ထိုကြယ်လေးမှာ တဖြည်းဖြည်းမှိန်ကာ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။
သူကိုယ်တိုင်လည်း ထိုကြယ်လေးကဲ့သို့ မှိန်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ချင်ပါသည်။
ပြတင်းပေါက်မှ ဝင်လာသော နေရောင်ခြည်တန်းလေးက မျက်စိတည့်တည်ပေါ်ထိ
ရောက်လာသဖြင့် သူနိုးလာရသည်။ သူနိုးနိုး ခြင်း ကုတင်ဘေးမှာ ထိုင်နေသော
သက်ပိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ သက်ပိုင်က သူ့မိဘတွေနှင့် တအားရင်းနှီးသဖြင့်
အိမ်ကို ထိုကဲ့သို့ တံခါးမရှိ ဓားမရှိ ဝင်ထွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည်။
သက်ပိုင်က မနက်အစောကြီး သူပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း တွေ့ရာ
စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲတွင် ဆွဲခြစ်ရေးထားသော 'ငါသည်
ဟိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ၊ ငါ့ကိုယ်ငါ မုန်းသည်' ဆိုသော
ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရေးမိမှန်းမသိသည့် စာလုံးများ ကို ထိုင်ဖတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သူနိုးလာတာကို မြင်တာနှင့် သက်ပိုင်က သူ့ကို နွေးထွေးစွာ ပွေ့ဖက်လိုက်ပါသည်။
"ဝေလင်းရယ်… မင်းကိုယ်မင်းမုန်းစရာမလိုပါဘူး။ မင်းဟာ
ဟိုမိုတစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာပြီဆိုရင် မင်းကိုယ်မင်း အတင်း အကျပ်
ချုပ်တည်းမထားသင့်ဘူး သူငယ်ချင်း။ မင်း အဲဒါကို လက်ခံနိုင်ရမယ်။ ဒါဟာ
အမှားအယွင်းတစ်ခုမှ မဟုတ်တာပဲ။ အခုခေတ်မှာ ဆိုရင် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးက
ဟိုမိုဆိုတဲ့ လူတန်းစားကို လက်ခံနေကြပြီပဲလေ။ ဒါဟာ…. ကြောက်မက်ဖွယ်၊
ထူးဆန်းထိတ်လန့်ဖွယ် အရာ တစ်ခု မဟုတ်တော့ပါဘူး……။"
သူ လှဲနေရာမှ ထထိုင်ရင်း သက်ပိုင်ကို တင်းကျပ်စွာ ပြန်ဖက်ထားလိုက်မိပါသည်။
"ငါ နားလည်ပါတယ် သက်ပိုင်ရယ်။ ဒါ….. အမှားတစ်ခုမဟုတ်မှန်း ငါသိပေမယ့်..
ငါ.. ငါ…….. ငါ့ကိုယ်ငါလက်မခံချင်သေးဘူး။ ဟိုမိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါ့ကို
လူတွေက မြင်မယ့် အမြင်ကိုငါကြောက်တယ်။ ပါတ်ဝန်းကျင်က ငါ့ကို
လှောင်ပြောင်ကြမှာ ငါကြောက်မိ တယ်။ ငါ.. ငါ့ဘဝကို အဲလို မဖြစ်ချင်ဘူး
"ဒီမှာ ဝေလင်း။ ဟိုမိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ မင်း ငါ့အပေါ် ဘယ်လိုမြင်ခဲ့လည်း။
ငါ့အပေါ် မပြောင်းလဲစွာ အရင်အတိုင်း သူငယ်ချင်းအနေနဲ့
ပေါင်းသင်းနိုင်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ အကယ်၍ မင်းပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်
ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်း ပဲဖြစ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ မင်းငါ့ကို
"ဒါ… ဒါပေမယ့် ငါက နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုး။
သူ စကားကိုဆက်မပြောပဲ သက်ပိုင်၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ
သက်ပိုင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်သည်။ သက်ပိုင်က ကြည်လင် ပြီး
အားအင်ပြည့်ဝသော မျက်လုံး အစုံနှင့် သူ့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရင်း
"ငါတို့ နားလည်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့ သူငယ်ချင်းရယ်။
ကြောက်ရင်လွဲ ရဲရင်မင်းဖြစ်တဲ့။ ငါတို့ အရာရာကို တွေး
ကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ ငါကျောင်းနံရံတွေပေါ်မှာ ရေးခြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့
စာသားတွေလိုပေါ့။ ဟိုမို တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝက မလွယ်ပါဘူး။ ပိုပြီး
သတ္တိရှိရပါတယ်။ ပိုပြီးရင်ဆိုင်တတ်ရတယ်.. ဆိုတဲ့စာသားအတိုင်းပဲ။
ငါတို့……. ရင်ဆိုင်တတ်ရမယ်။ ရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားစမ်းပါ သူငယ်ချင်းရယ်။"
တစ်ခါက ကျောင်းအိမ်သာထဲတွင် တွေ့ခဲ့ဖူးသော စာသားတစ်ချို့ကို
သူပြန်သတိရမိပါသည်။ ဒါဆို ဒါတွေက သက်ပိုင်ရေးခဲ့ တာတွေ့ပေါ့။ အရာရာဟာ
သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အချိတ်အဆက်မိစွာ အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်နေခဲ့သလိုပင်။
သူဟိုမိုဖြစ်ဖို့ အစောကြီး ထဲက ကံပါလာခဲ့သည်ထင်ပါသည်။
"နော်… ဝေလင်း.. မင်းရင်ဆိုင်ဖို့ သတ္တိမွေးမယ်ဟုတ်လား။"
သူဘာမှ ပြန်မဖြေပဲ သက်ပိုင်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဖက်ထားလိုက်မိပါသည်။
ဒီနေ့မှ ထူးထူးခြားခြား သက်ပိုင်၏ ရင်ငွေ့က ပိုပြီးနွေးထွေးနေသည်ဟု
ထိုညက သက်ပိုင်၏ လက်မောင်းပေါ်တွင် သူမှီရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါသည်။
နှစ်သိမ့်သော အနေနှင့် ပွေ့ဖက်ပေးထားသော သက်ပိုင်၏ လက်များဆီမှ
ထူးခြားသော နွေးထွေးမှုကို သူမေ့လို့ရတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါ….။
သက်ပိုင်ကတော့ လက်တစ်ဖက်နှင့် သူ့ကျောပြင်ကိုခပ်ဖွဖွပုတ်ပေးနေပါသည်။
သူ…….. အိပ်……….ပျော်………… သည်………. အထိ…………….။
'လာ.. မင်းကို တစ်နေရာခေါ်သွားမယ်' ဆိုလို့သာ လိုက်လာရသည်။
သက်ပိုင်ခေါ်သွားမည့်နေရာကို သူမသိပေ။ ရှစ်မိုင်ကို ရောက်တော့ Top Centre
ဆိုသော အဆောက်အဦးထဲ သူ့ကိုခေါ်သွားလေသည်။ အထဲကိုဝင်လိုက်သည်နှင့်
ဟိုတစ်စု ဒီတစ်ခု ထိုင်ပြီး စကားပြောနေသော ကောင်လေးတော်တော်များများကို
တွေ့လိုက်ရသည်။ ဖိနပ်ထားတဲ့ဘီဒိုတွေထဲ ဖိနပ်တွေထည့်ရင်း သက်ပိုင်က
'အဲဒါတွေ အကုန် ဟိုမိုတွေချည်းပဲ' ဟုပြောပြပါသည်။
သူ အံ့သြသွားမိပါသည်။ ထိုင်နေသော ကောင်လေးများမှာ များသော အားဖြင့်
သူတို့အရွယ် လူငယ်လေးများသာဖြစ်ကြသည်။ သူ့ထက်အသက်ကြီးသူများ
ငယ်သည့်သူများ စသည်ဖြင့်လည်းရှိပါသည်။ စဝင်လာချင်းတုန်းက
ယောက်ျားလေးတစ်အုပ်ဟု ထင်ခဲ့မိ သော်လည်း သေချာကြည့်မှသာ
ဟိုမိုမှန်းသိသာသူများ၊ မသိသာသူများ စသည်ဖြင့် တွေ့ရပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဟိုမိုပါဟု လက်ခံထားသူများ ဖြစ်သည်ကို သူ အနည်းငယ်တော့
သက်ပိုင်က သူ့ကို အားလုံးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ အားလုံးက သူ့ကို
နွေးထွေးစွာပင် စကားပြောကြပါသည်။ နောက်မှ ရောက်လာသူတစ်ယောက် အနေဖြင့်
လိုအပ်သော အကူအညီရှိလျှင်ပြောဖို့လည်း ရင်းနှီးစွာ ပြောကြပါသည်။
လာမိတ်ဆက်ကြ သည်လည်းရှိသည်။ ဆေးကျောင်းသားလေးများ၊ ဆရာဝန်များ၊
အင်ဂျင်နီယာများ စသည်ဖြင့် အားလုံးက သူ့အလုပ်အကိုင်နှင့်သူ သူ့ဘဝနှင့်သူ
လာမိတ်ဆက်သူများရှိသလို နံမည်မေးပြီး လာစနောက်တဲ့သူလည်းရှိသည်။
သူတစ်ယောက်ထဲ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်မနေ ပဲ အားလုံးပျော်ရွှင်နေသလို
သူပျော်ရွှင်နေခဲ့ရပါသည်။ ခဏတွင်းမှာပင် အားလုံးနှင့်
သူငယ်ချင်းအရင်းများလို သူရင်းနှီးသွားပါသည်။ သူ သိခဲ့သလို ဟိုမိုများသည်
သူတပါးအားရယ်မောအောင် ပညာသားပါပါနှင့် စကားပြောတတ်သည် ဆိုတာပိုပြီး
သေချာသွားခဲ့သလို၊ ဟိုမို များက သူတပါးရင်ထဲထိ ထိုးထွင်းမြင်နိုင်ကာ
ခဏကြာတော့ အားလုံးကို ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းများမေးကာ game ကစားကြပါသည်။
ကိုယ်စီ အဖွဲ့များ ဖွဲ့ပေးကာ ဗဟုသုတ မေးခွန်းများ၊
ကျန်းမာရေးနှင့်ပါတ်သတ်သော မေးခွန်းများ၊ သမိုင်းနဲ့ပါတ်သတ်သော
မေးခွန်းများ၊ ပြည်ပအနုပညာရပ်ဝန်းမှ မေးခွန်းများ စသည်ဖြင့်
မေးခွန်းမျိုးစုံဖြေရပါသည်။ အားလုံး အပြိုင်အဆိုင် အလုအယက်ဖြေကြပါသည်။
မေးခွန်းများထဲတွင် သူတစ်ခါမှ မသိခဲ့ဖူးသော မေးခွန်းများလည်းပါသလို
ထိုမေးခွန်းများကို တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်က ဖြေနိုင်ကြသည်ချည်းပင်။
သူဒုတိယအကြိမ် အံ့အားသင့်မိသွားပါသည်။ ဟိုမိုများအနေဖြင့် ဘဝကို
ပြစ်စလတ်ခတ်မထားကြပဲ ကြိုးစားနေကြသည်။ ပညာဗဟုသုတပြည့်ဝအောင်
နေထိုင်ကြသည်ကို သူသိလိုက်ရပါသည်။ သူအတွေးများ မှားယွင်းခဲ့ပါသည်။
ဟိုမိုဖြစ်တာနှင့် ဘဝကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိဟု သူသိလာရပါသည်။
အားလုံးမှာရှိနေသော ယုံကြည်မှုများသည် သူ့ဆီကို
တဖြည်းဖြည်းစိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့လာသလိုပင်။ ဒီအချိန်မှစ၍ သူ့ကိုယ်သူ
ဟိုမိုတစ်ယောက်အနေနှင့် လက်ခံရန် သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
"PSI လိုနေရာမျိုးရှိနေတာ ကောင်းတယ်နော်.. သက်ပိုင်။
ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေ ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အပြင်၊ ဗဟုသုတတွေလည်းရတယ်။
အရွယ်ရောက်ခါစတွေ ၊ မသိနားမလည်သေးတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း HIV, AIDS
ကာကွယ်တားဆီး ရေးနဲ့ တခြား ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကို ဆွေးနွေးပေးတာ၊
အကြံပေးတာ၊ ပညာပေးတာ၊ လက်တွေ့လုပ်ပြတဲ့ အစီအစဉ်တွေရှိတာ တအားကောင်းတယ်ကွ။
ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့ အားလုံးက စိတ်ချရသော နည်းလမ်းနဲ့
လိင်ဆက်ဆံဖို့နည်းလမ်းကို သိရှိလာတယ် နော်။ HIV, AIDS နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး
မှားယွင်းစွာ ယူဆနေတာတွေလည်း သိရှိလာရတယ်။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကိုလည်း
အရင်က ကြားဖူးနားဝထက် ပိုနားလည်လာတယ်။ ဥပမာကွာ ငါ့လို အခုမှ
ဟိုမိုစဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် တော်တော်သိလာရတယ်။ ဒီနေ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့
ဖဲကြိုးနီ သင်္ကေတလေး အကြောင်းဆိုရင် တော်တော်ကို နားထောင်လို့
သူဘေးမှ တဖွဖွနှင့်ပြောလို့မပြီးတာကို သက်ပိုင်က
ခပ်ပြုံးပြုံးနှင့်နားထောင်နေပါသည်။ တစ်နေရာရောက်တော့ သက်ပိုင်က
ခဏလိုက်ခဲ့ဦးဟုဆိုကာ Internet ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲခေါ်သွားသည်။ ထို့နောက်
website နှစ်ခုတွင် သူ့နံမည်နှင့် Sign up လုပ်ပေးလေ သည်။
www.myanmarlgbt.org နှင့် www.mymgedu.com ဖြစ်သည်။
"အဲဒါဘာ Website တွေလည်းသက်ပိုင်ရ…."
"ဟိုမိုတွေပဲရှိတဲ့ Website တွေလေ ဝေလင်းရ။ မင်းသုံးကြည့်ရင်သိမှာပေါ့။
သိပ်မသုံးတတ်ရင် ငါ့ကိုမေးလေ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီ site ထဲကလူတွေကိုလည်း
သက်ပိုင်ပြောတဲ့အတိုင်း သူ ထိုနေ့က စသုံးကြည့်မိပါသည်။ အဆင်မပြေတာတွေကို
သက်ပိုင်ကိုမေးလိုက်၊ လုပ်ကြည့်လိုက်နှင့် တော်တော်တော့သူသုံးတတ်သွားသည်။
နောက်ပိုင်း သူသုံးရင်း တစ်ချို့က သူ့ကို စကားလာပြောရင်း
အပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်းပါသည်။ သူ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ သက်ပိုင်ဆီ
"မင်းတွေ့ချင်ရင်သွားတွေ့လေ။ Online ပေါ်ကနေ အပြင်မှာ တွေ့ဖို့ချိန်းတာက
Internet ပေါ်မှာဖြစ်နေကျကိစ္စတွေပဲ။ မထူး ဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက ဒီထဲမှာ dating
လုပ်ဖို့ရှိနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးပေါ့။
ဒီလိုနဲ့သက်ပိုင်ကြောင့် သူသုံးရတာပိုအဆင်ပြေလာပါသည်။ Forum ထဲက
ဆေးခန်းထဲတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ပါတ်သတ်တာတွေ မေးနိုင်သည်။
ယောက်ျားလေးများဖြစ်တတ်သည့် ရောဂါများကအစ၊ အကုန်လုံးကို ထိုforum တွင်
သေချာစွာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေး သည်။ ထို forum ထဲတွင် မေးထားသည်နှင့်
ဖြေကြားထားသည်များကို ကြည့်ပြီး တစ်ချို့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုပင်
သူမှတ်ထားလိုက် သေးပါသည်။ အခက်အခဲရှိလျှင် မေးမြန်းဖို့လည်း forum
များရှိသည်။ ရောက်တတ်ရာရာ ဟာသများပြောဖို့ရန်လည်းရှိသည်။ တဖြည်း
ဖြည်းသုံးရင်း အားလုံးက ညီညွတ်နေကာ မိသားစုဆန်သည်ဟု သူထင်လာမိပါသည်။
တစ်ခါတစ်ခါ သူစိတ်ညစ်စရာရှိလို့ ဒီနေ့လို forum
မျိုးမှာရေးလိုက်ပြီဆိုရင် အားလုံးက ဝိုင်းပြီးနှစ်သိမ့်ပေးကြသည်။
အကြံဝိုင်းပေးကြလေသည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမ တစ်သိုက်ကြီး
ရုတ်ချည်းပေါ်လာသလို တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးထားသော နွေးထွေးသည့် စေတနာကို
နောက်ပိုင်း site ထဲမှာ သူတို့ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ဖွဲ့ထားသည့် group
တစ်ခုကို တွေ့သဖြင့် သူဝင်ရောက်လိုက်မိပါသည်။ စာမေးပွဲနီးတော့
သူလိုအပ်သည်များကို group ထဲမှ သူများကို ဆက်သွယ်ပြီး
သူမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဘယ်သူနဲ့မှ စာစုမလုပ်ပဲ site ထဲမှ လူများ၏
အကူအညီဖြင့် စာမေးပွဲကို ကောင်းစွာ ဖြေနိုင်ခဲ့လေသည်။ Website ထဲမှ
ဟိုမိုများအကြားတွင် သူ့ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မရရှိဖူးခဲ့ သည့် ကြည်နူးမှုများ၊
တစ်ရက်…. ညဘက်ကြီးမှ သက်ပိုင် သူ့ဆီလာလည်ပါသည်။ သူ့အခန်းထဲမှ ဝရန်တာတွင်
နှစ်ဦးသားမတ်တပ်ရပ် စကားပြော ရင်း သက်ပိုင်က သူ့ကို `ငါမြင်စေချင်တာတွေ
မြင်ပြီလား' ဟုမေးပါသည်။ သူက ခေါင်းကို ငြင်သာစွာငြိမ့်လိုက်ရင်း
"တစ်ခါက ငါကောင်းကင်ပေါ်က နံမည်မရှိတဲ့ မထင်မရှားကြယ်လေးတစ်ပွင့်လို
ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ပဲ မှုန်ဝါးပြီး ပျောက်ကွယ် သွားချင်ခဲ့တယ်ကွ။ ငါ….
ဟိုမိုတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်ခဲ့တုန်းကပေါ့။ အခုတော့ အဲဒီ့အတွေးကို
"မင်းသိလား ဝေလင်း။ နံမည်မရှိတဲ့ ကြယ်လေးတွေကိုကြည့်ရင်း
မင်းနံမည်ရှိတဲ့ ကြယ်လေးဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းမိချင် ဆုတောင်းမိ လိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အရာရာဟာ အကျိုးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တည်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ
မင်းသိလာတဲ့ တစ်နေ့မှာ မင်းဆုတောင်းကို မင်း ပြင်လိုက်မိမှာ သေချာတယ်။
မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း။ ဒီနံမည်မရှိတဲ့ ကြယ်လေးတွေကြောင့်လည်း
နံမည်ရှိတဲ့ကြယ်လေးတွေက ပိုပြီး ထင်ရှားလာရတာပေါ့။
ဒီကြယ်လေးတွေကြောင့်လည်း ကောင်းကင်ကြီးက စည်ကားပြည့်စုံစွာ လှပနေတာပေါ့။
ကြယ်စုံတဲ့ ညတစ်ည ဖြစ်ဖို့ရာ ဒီကြယ်မှုန်ကြယ်မွှားလေးတွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေက
ယုံကြည်ချက်ပြည့်ဝစွာ စကားပြောနေသော သက်ပိုင်ကို သူငေးမောနေမိသည်။
သက်ပိုင်သည် ရဲရင့်သော ဟိုမိုတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။
"Homo ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို၊ gay ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လူတွေက
မခံယူချင်ကြဘူး။ ပြစ်တင်ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ တို့ တအားသဘောကျတဲ့
အနုပညာရှင် မင်းသားမင်းသမီးတွေနောက်က မိတ်ကပ်ပညာရှင်အခြောက်တွေက
သူတို့ရဲ့ အလှအပပေါ် မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့ ပံ့ပိုးပေးနေရတယ်။ အားလုံးရဲ့
မျက်စိထဲ perfect ဖြစ်သွားဖို့ အလှအပကိုဖော်ထုတ်ပေးနေရတယ်။
ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ လိုက်ဖက်တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးနေတယ်ဆိုတာ
သူတို့မေ့လျော့နေတယ်။ မိတ်ကပ်ဆရာအခြောက်တစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျား
တစ်ယောက်လိုလဲ မြင်နိုင်တယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်လိုလဲခံစားနိုင်တဲ့အတွက်
သူပြင်ရမယ့် အနုပညာရှင်ကို ယောက်ျားတစ်ယောက်က လည်း ချီးမွမ်းအောင်၊
မိန်းမချင်း လည်ပြန်ငေးရအောင် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။ ဒီလို
ပင်ကိုယ်ပါရမီမျိုးကို လူတွေက လက်ခံနိုင်လို့ပဲ မိတ်ကပ် ဆရာတွေကို
အနုပညာရှင်တွေက ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ အမှီပြုနေရတာပေါ့။ ဒါက
အများကြီးထဲကမှ ငါက ဥပမာတစ်ခုကိုပြောတာပါ။ လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်
အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဟိုမိုတွေက သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ပါရမီနဲ့
တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ပါတ်သတ်နေတယ်ဆိုတာ မေ့ ထားလို့မရပါဘူး။
မကောင်းမြင်တတ်တဲ့ လူတွေကိုက အပြစ်တင် ပြောချင်ရင် စကားကို
ရှာကြံပြောလို့ရတာပဲလေ။ တကယ်တမ်း အဲလို လိုက်လံ ကဲ့ရဲ့နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ
အသက်အန္တရာယ် အရေးကြီးနေပြီဆိုရင် သူပြရမယ့်ဆရာဝန်ဟာ homoလား၊ straight
တစ်ယောက်လား ဆိုတာ သူစဉ်းစားနေပါတော့မလား။ ဘာပဲဖြစ်ြဖစ် ဟိုမိုတွေရဲ့
ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းကို အားလုံးက လက်ခံအောင် ငါတို့ကြိုးစားရမယ်။
အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ရမယ်။ မင်း ရင်ဆိုင်မယ်မဟုတ်လား….. ဝေလင်း"
သက်ပိုင်စကားကို ထောက်ခံသည့်အနေနှင့် သူခေါင်းကိုငြိမ့်လိုက်မိပါသည်။
သက်ပိုင်က တက်ကြွစွာပြောနေရင်း မောသွား သဖြင့် သူ့ကို လှည့်ကြည့်ရင်း
"ကဲ……. မင်းအခု မင်းကိုယ်မင်း.. မုန်းတီးသေးလား"
သူ စဉ်းစားနေစရာမလိုပဲ ခေါင်းကိုခါနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သက်ပိုင်က သူ့အနားကို
"မင်း……. ကိုလတ်ကိုရော သတိရသေးလား……..။"
ကိုလတ်ဆိုမှ ပြန်တွေးမိပါသည်။ ကျောင်းပိတ်သွားပြီဖြစ်၍ ကိုလတ်နှင့်
မတွေ့ဖြစ်တော့ပေ။ နောက်ဆုံးတစ်ခါက် ကိုလတ်ဆီမှ
ထွက်လာခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ကိုလတ်က သူ့ဆီဆက်သွယ်သော်လည်း သူကိုလတ်ကို
ငြင်းဆန်ခဲ့ပါသည်။ တဒင်္ဂသာယာမိသော ကိုလတ်ထက် ရင်ထဲတွင် တစ်သက်တာ
ချစ်ရမည့်သူကို သူစောင့်ဆိုင်းချင်သေးသည်။ ထိုသူသည် ကိုလတ်လည်း
အနည်းငယ်တွေဝေပြီးမှ သူခေါင်းကို ခါနိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ
ကိုလတ်အကြောင်းတွေးမိသော်လည်း သတိရခြင်းတော့ မဟုတ်မှန်း သူသိလေသည်။
သက်ပိုင်က သူ့ပခုံးကို ခပ်ဖွဖွ လာဖက်ကာ အကြာကြီးတိတ်ဆိတ်သွားလေသည်။
ထို့နောက်မှ တိုးညှင်းသော စကားတစ်ခွန်း ကို ဆိုပါသည်…….။
ထိုအချိန်တွင် ကြယ်တစ်စင်းကြွေသွားသဖြင့် သူ ပျော်ရွှင်စွာထအော်လိုက်ပါသည်။
"ဟာ….. ဟိုမှာ ကြယ်ကြွေသွားပြီ သက်ပိုင်။ ငါတို့ ဆုတောင်းကြစို့…………"
သူရော သက်ပိုင် မျက်လုံးများမှိတ်ကာ ဆုတောင်းလိုက်မိပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်
တစ်ဦး ဘာကိုဆုတောင်းလိုက်သည်ဟု၍ မသိ သော်လည်း သူတို့နှစ်ဦးသား၏
ဆုတောင်းများမှာ သူတို့ရင်ထဲတွင် ကြည်နူးမှုကို စိမ့်ဝင်သွားစေကြောင်း
ကြည်လင်သွားကြသော မျက်နှာများက သက်သေပြနေပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ဟိုမိုတစ်ယောက်ဟု
ခံယူခဲ့သော်လည်း သူအခုအချိန်ထိ ချစ်သူမထားခဲ့ရ သေး။ ဟိုမိုတွေရဲ့
အကြောင်းကိုသာလေ့လာရင်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှလည်း သူ့ဘဝကို သူကြိုးစားခဲ့သည်။
အခုဆိုလျှင် သူက နံမည်ကြီး Web Designer တစ်ဦးဖြစ်နေပြီ။ Web Design
ဆွဲရာတွင် အရောင်ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ခြင်း၊ layout တွေကို လှပစွာ
တည်ဆောက်နိုင် သော အမြင်ရှိခြင်းကြောင့် သူဆွဲသော Web Design တွေကို
လူကြိုက်များလာခဲ့ပါသည်။ ဟိုမိုတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ဖြစ်သော
အလှအပကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း ဆိုသော အကျိုးကျေးဇူးကို သူကောင်းမွန်စွာ
အသုံးချနိုင်သွားခဲ့သည်ဟု သူ့ကိုယ်သူ ထင်မိပါသည်။ ယခု အချိန်တွင် သူသည်
သက်ပိုင်ကဲ့သို့ပင် ရဲရင့်သော၊ ယုံကြည်မှုများစွာဖြင့်
တစ်ရက်… ဟိုမိုတစ်ယောက်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ပါလာသော
ပါရမီများအကြောင်းစဉ်းစားရင်း ငယ်စဉ်က ဆရာရေးခိုင်းချင်ခဲ့သည် the
Advantages ofaHomo ဆိုသော အကြောင်းအရာကို သူရေးရန်စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။
Internet ကိုအမြဲထိတွေ့နေရသူဖြစ်သဖြင့် အ ကြောင်းအရာများကို internet
ပေါ်မှာပင် ရှာယူကြည့်မိလေသည်။ တွေ့ရသော အရာများက
သင်ဟိုမိုဖြစ်နေသည့်အတွက် မိန်းကလေး များနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးစိတ်ချစွာ
ပေါင်းသင်းနိုင်သည်၊ သင့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် လူကြားထဲပေါ်လွင်စေမည်
စသော အရာများသာဖြစ်နေ လေသည်။ အဆင်ပြေလောက်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို
နောက်ဆုံး သူကိုယ်တိုင် နားလည်သလောက် ရေးကြည့်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ
စာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူပြီး ချရေးကြည့်ရန် သူဆုံးဖြတ်မိပါသည်။ အရင်ဆုံး
ဟိုမိုတို့၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်များကို ရေးကြည့်မိသည်။
Talents ofaHomo
(၁) ဟိုမိုတစ်ယောက်ဟာ သာမာန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ထက် အလှအပကို
ပိုပြီးမက်မောခြင်း၊ သာမာန်မိန်းမတစ်ယောက်ထက် အလှအပတရားကို
(၂) တိမ်မြုပ်နေသော အရာများ၊ လူအများသတိမထားမိသည့် အရာများကို
အလွယ်တကူမြင်နိုင်ခြင်း၊ ထိုအရာကို မည်ကဲ့သို့ အသုံးချရမည်ဆိုတာကို
(၃) လူတစ်ဖက်သား၏ စိတ်ခံစားချက်ကို ထိုးဖောက်မြင်ရောက်နိုင်ခြင်း
(၄) စကားပြောရာတွင် ရယ်မောစရာများကို ပညာသားပါပါနှင့် ပြောနိုင်ခြင်း၊
ပျော်ရွှင်နေသူကို ပိုမိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလို စိတ်ညစ် နေသူကို
(၅) အလင်းအမှောင်သဘောတရားကို ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းဖြင့်ပင် ပိုမို
နားလည်သိမြင်ခြင်း၊ အရောင်တွေကို နိုင်နင်းစွာ အသုံးပြု နိုင်ခြင်း
(၆) မိန်းမတစ်ယောက်က အဆင်းပြည့်စုံရမည်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်က
အချင်းပြည့်စုံရမည်ဟုဆိုပါက ဟိုမိုတစ်ယောက်မှာ အဆင်း ရော
(၇) မိသားစုထဲတွင် မိဘများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်ရင်းနှီးသူတစ်ယောက်
ဖြစ်နေတတ်ခြင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲတွင် အလေးထားရသူ
(၈) ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ဖြေရှင်းချက်ကို မြန်ဆန်စွာ
စဉ်းစားနိုင်ခြင်း၊ ထိုဖြေရှင်းချက်က တခြားသောသူများထက် ပိုမိုထိရောက်
(၉) အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို အလိုလိုနားလည်ခြင်း၊ လုပ်သင့်သင့်အရာကို
(၁၀) သာမာန်လူများထက် အနုပညာတွင် ပိုမိုစိတ်ဝင်တစားရှိတတ်ခြင်း၊
ပိုမိုထူးချွန်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းအောင်တိုးတက်အောင် ပြုလုပ် နိုင်ခြင်း
(၁၁) အချိန်ကို တခြားသူများထက် ပိုမို တန်ဖိုးထား အသုံးချတတ်ခြင်း
(၁၂) အမြဲတွေးတောနေတတ်ခြင်း၊ ထိုအတွေးများကို အကျိုးရှိအောင်
(၁၃) ကောင်းမွန်သော အရသာကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ ကောင်းသော အသံကို
ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းကောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
(၁၄) လိုက်ဖက်မည့်အရာဝတ္ထုများ၊ အရောင်များကို အလိုလို သိမြင်တွဲဖက်နိုင်ခြင်း
(၁၅) ဆန်းပြားရှုပ်ထွေးသော ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်နိုင်ခြင်း
(၁၆) မသိသော ကိစ္စတစ်ခုကို သိဟန်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ဟန်ကိုယ့်ဖို့
(၁၇) ကျော်ကြားသောအရာများ၊ ခေတ်စားနေသော အရာများ၊ လူစိတ်ဝင်စားနေသော
ကိစ္စများ၊ နံမည်ကြီးသော တံဆိပ်များကို အားလုံးထက်ဦးစွာ သိရှိတတ်ခြင်း၊
(၁၉) အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို နားလည်လွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်နားလည်ထားသည်များကို
အလွယ်တကူ ပြန်လည် ဝေမျှပေးတတ်ခြင်း
(၂၀) မိမိကိုယ်မိမိ ဒုက္ခမရောက်အောင် မည်ကဲ့သို့နေထိုင်ရမည်ဆိုတာ သိခြင်း
(၂၁) ဝေဖန်နိုင်စွမ်း မြင့်မားခြင်း
(၂၂) မိတ်ဆွေအဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအဖြစ် လွယ်ကူစွာ ပေါင်းသင်းနိုင်ခြင်း၊
သူငယ်ချင်းကောင်း အနေဖြင့် တည်ရှိတတ်ခြင်း
(၂၃) မိမိ၏ ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် အခြားသူများထက် သိသာထင်ရှားနေတတ်ခြင်း
(၂၄) အခြားသော ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်တို့၏
အချစ်ရေးတွင် အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ထိရောက်သော
(၂၅) အနစ်နာခံပြီး ထိရောက်အောင် ကူညီတတ်ခြင်း
(၂၆) ဟိုမိုအချင်းချင်း တအား စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း
ရေးရင်း အချက်အလက်များက များပြားလာပါသည်။ သူဘာဆက်ရေးရမှန်း
မသိဖြစ်နေချိန်တွင် ရုတ်တရက် သူ့ပါးပြင်သည် နူးညံ့သော အရာတစ်ခုကြောင့်
သက်ပိုင်က စာထိုင်ရေးနေသော သူ့ကို အနောက်မှ သိုင်းဖက်ကာ သူ့ပါးပြင်ကို
နမ်းရှိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာရေးနေတာ ကို အာရုံစိုက်နေသဖြင့်
သက်ပိုင်ရောက်နေသည်ကို သူမသိလိုက်ပါ။ ဘွဲ့ရပြီးသွားထဲက သက်ပိုင်ကလည်း
ဆရာဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေသဖြင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တွေ့တစ်ချက်
မတွေ့တစ်ချက်နှင့် နောက်ပိုင်း မတွေ့ဖြစ်တာ အတော်ကို
ကြာနေခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်။ သူတစ် ခုခုပြောမည်ဟု ကြံလိုက်ချိန်တွင် သက်ပိုင်က
ဘောပင်ကိုင်ထားသော သူ့လက်ကို အုပ်ကိုင်ကာ စာရွက်ပေါ်တွင် နောက်ထပ်စာ
(၂၇) သာမာန်သူများထက် ပိုပြီး ချစ်တတ်ခြင်း၊ အချစ်ကြီးခြင်း၊
ချစ်သူအပေါ်နားလည်ဖို့ကြိုးစားတတ်ခြင်း၊ ချစ်သူအား သူမတူသော
အချစ်များနှင့် နှလုံးသားအတွင်းထဲထိ ဖောက်ထွင်း ချစ်တတ်ခြင်း…..
ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူဘာမှ ဆက်မပြောနိုင်သေးခင်မှာပင် သက်ပိုင်က သူ့ပေါင်ပေါ်ကို
အရုပ်တစ်ရုပ် တင်လိုက်လေသည်။ အရုပ် ကိုမြင်တော့ သူတအားပျော်ရွှင်သွားကာ
တအားလည်း အံ့အားသင့်သွားလေသည်။ မနှစ်က သူ.. သက်ပိုင်နှင့် အတူ
ဈေးဝယ်ထွက်ချိန် တွင် သူအရမ်းသဘောကျကာ လိုချင်ခဲ့သော
လူတစ်ဖက်စာထက်ကြီးသည့် ဖြူကောင် အရုပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ အညိုရင့်ရောင် အမွှေး
ကြမ်းလေးများ တစ်ထောင်ထောင်နှင့် ဝတုတ်တုတ် အရုပ်ကြီးကို သူတအားသဘောကျကာ
လိုချင်ခဲ့သော်လည်း ဈေးတအားကြီးသဖြင့် သူရော
သက်ပိုင်ပါမဝယ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ အခုဘယ်လိုနည်းနဲ့ ထိုအရုပ်ကို
သက်ပိုင်ရှာဝယ်လာခဲ့သည်မသိပေ။ သူအတော်ကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ် ကာ
"ငါ ဒီအရုပ်ကို သိမ်းထားတာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ ဝေလင်း၊
မင်းအရမ်းလိုချင်နေမှန်းသိလို့ ငါ ပိုက်ဆံစုပြီး ဝယ်ထားခဲ့တာပါ။
မင်းမွေးနေ့မှာပေးဖို့ ငါဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာလေ။ ဒီနေ့မင်းမွေးနေ့မို့လို့
ဟုတ်သားပဲ။ သူ့မွေးနေ့ကို သူကိုယ်တိုင်ပင် မေ့လျှော့နေခဲ့မိသည်။ တလောက
project တွေတအားကျသဖြင့် အလုပ်တွေပိ ကာ သူအရာရာကို မေ့ထားခဲ့သည်မှာ
ကိုယ့်မွေးနေ့ပါ ကိုယ်မေ့သွားသည့်အထိပင်။ သက်ပိုင်က သူပျော်ရွှင်နေသည်ကို
ကြည့်ပြီး နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုံးကာ စကားကိုဆက်ပါသည်။
"ပြီးတော့ ငါလာနှုတ်ဆက်တာ ဝေလင်း….။ ငါဒီတစ်ခေါက် နယ်မှာ တာဝန်ကျတယ်။
နယ်သွားရမယ်။ နောက်နှစ်နှစ်လောက် နေမှ ပြန်လာရမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါ….. မင်းကို
လာနှုတ်ဆက်တာပါ။ နှုတ်ဆက်ပါတယ် ဝေလင်း။ ငါတို့ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့…………"
သက်ပိုင်က ညှိုးနွမ်းသောမျက်နှာဖြင့် သူ့ပခုံးကို ပုတ်ပြီး နှုတ်ဆက်ကာ
ထွက်ခွာသွားပါသည်။ သူတစ်ခုခုပြောတာကိုပင် မစောင့်ပဲ လေးလံသော
"မင်းသိလား သက်ပိုင်။ ဟိုတစ်ခါ ကြယ်ကြွေတုန်းက ဆုတောင်းခဲ့တာတွေ မင်းမှတ်မိသေးလား"
သူ့စကားကြောင့် အခန်းပေါက်ဝတွင် တံခါးကို ဖွင့်ပြီးထွက်ခါနီးမှ
"ဒီအရုပ်လေးကို ရဖို့ ဆုတောင်းခဲ့တာလို့ ငါထင်ခဲ့တာ ဝေလင်း။ အဲဒီ့တုန်းက
မင်းဒီအရုပ်လေးကို အရမ်းလိုချင်နေခဲ့တာ မဟုတ်လား။"
သူဘာမှ ပြန်မဖြေမိပါ။ စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခု လစ်ဟာသွားသလို တွေဝေစွာ
မတ်တတ်ရပ်နေမိသည်။ သက်ပိုင်လည်း သူ့မျက်နှာ ကို အကြာကြီးငေးကြည့်နေပြီးမှ
အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီး ထွက်ခွာသွားပါသည်။
အိမ်ရှေ့မှ တစ်လှမ်းခြင်း ထွက်ခွာသွားသည့် သက်ပိုင်ကို အပေါ်ထပ် သူ့အခန်း
ပြတင်းပေါက်မှ ငေးကြည့်ရင်း သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှ တစ်ခုခုကို အရှိန်ပြင်းစွာ
ဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရသလို ဟာတာတာဖြစ်သွားပါသည်။ ပြတင်းပေါက်ဘောင်ကို
လက်ထောက်ကာ ပြတင်းပေါက် အပြင်ဘက်သို့ ခေါင်းကို ထုတ်၍
"ငါဆုတောင်းခဲ့တာက…….။ ငါဆုတောင်းခဲ့တာက မင်းနဲ့ တစ်သက်လုံး
သက်ပိုင်ထွက်ခွာသွားသည်လား၊ ထိုနေရာတွင်ပဲ ရပ်တန့်နေလိမ့်မည်လား
သူမမြင်ရတော့ပါ။ ခဏကြာတော့မှ အခန်းတံခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ
သူ့ကျောပြင်တစ်ခုလုံးရော ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးပါနွေးထွေးသွားပါသည်။ သက်ပိုင်က
သူ့ကို အနောက်မှ သိုင်းပြီး တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"ငါဆုတောင်းခဲ့တာရော မသိချင်ဘူးလား ဝေလင်း………။"
သူခေါင်းကိုခါလိုက်ပါသည်။ သူသိရန်မလိုတော့ပါ။ ဒူးထောက်ထိုင်ရင်း
သူမျက်နှာကို အနောက်ဖက်သို့လှည့်ကာ သက်ပိုင်၏ မွှေးညှင်းနုလေးများရှိသော
ပါးပြင်လေးကို ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းရှိုက်လိုက်မိပါသည်။
"ငါမင်းကို ချစ်တယ်…… သက်ပိုင်…………။"
သက်ပိုင်က သူ့ပါးကိုတစ်ချက်နမ်းကာ နှုတ်ခမ်းဖျားချင်းထိသည့်
အနမ်းတစ်ရှိုက်ကို နူးညံ့စွာပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက်
သူ့ပခုံးပေါ်မေးတင်ထားကာ တိုးညှင်းငြင်သာလွန်းသော အသံဖြင့်ပြောပါသည်။
"ငါ့ဆုတောင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဝေလင်း။ ငါလည်း မင်းကို
သက်ပိုင်က သူသုံးနေကျဖြစ်တဲ့ 'တအား'ဆိုသော စာလုံးကို
အသုံးပြုပြီးပြောလိုက်သဖြင့် သူသဘောကျကာ ပြုံးမိပါသည်။ နှစ်ဦးသား
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကြည့်ကာ ကြည်နူးစွာ ပြုံးနေမိကြပါသည်။
ထိုညကလည်း သက်ပိုင်အိမ်မပြန်ခဲ့ပေ။ သူ့လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းတင်ကာ
သူနှင့်အတူ ငယ်စဉ်ကအကြောင်းများကို ပြောရင်း နှစ်ဦးသား
ရယ်မောနေခဲ့မိကြပါသည်။ မိုးချုပ်မှ သက်ပိုင်အရင် အိပ်ပျော်သွားတော့
သူသက်ပိုင်၏ နဖူးပြင်လေးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းကာ goodnight kiss ပေးပြီး
ထိုညအိပ်မက်ထဲတွင် ဆရာက gay အလံဖြစ်သော သက်တန့်ရောင် အလံကို
ခြုံလွှားလာကာ သူ့ဆီကိုလာပြီး အနီရောင် ဖဲကြိုးစလေး ကမ်းပေးပြန်ပါသည်။
ဖဲကြိုးလေးကိုကိုင်ပြီး အရင်ကလို သူတွေဝေမနေတော့ပေ။ ဖဲကြိုးနီလေးကို
အလယ်မှဝိုင်းလိုက်ပြီး အစနှစ်စကို အပြင်ဘက်ကိုထွက်သည့် ဖဲပြားပုံစံလေး
"အနီရောင် ဖဲပြားသင်္ကေတလေးဟာ နိုင်ငံတကာ AIDS ရောဂါ အသိကြွယ်ဝစေဖို့
စာနာစိတ်နဲ့ လူတိုင်းဝတ်ဆင်ကြတဲ့ အထိမ်းအမှတ်သင်္ကေတဖြစ်တယ်။
အများပြည်သူတွေကို HIV ကို စိုးရိမ်စေဖို့ ပါဝင်ကူညီလာကြဖို့
တိုက်တွန်းရာကျစေပါတယ်။ ဆရာဆိုလိုချင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဟိုမိုတွေ
ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း နားလည်သွားပါပြီ
ဆရာ…..။ ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ့မယ်။ ရင်ဆိုင်ပါ့မယ်ဆရာ……..။"
ဆရာက ဖဲကြိုးလေးကို ကိုင်ကာ သူ့နှလုံးသားရှိရာဆီသို့
တို့ထိနှစ်မြှုပ်လိုက်ပါသည်။ အနီရောင် ဖဲကြိုးစလေးမှာ သူ့ရင်ဘတ် ထဲ..၊
နှလုံးသားထဲ တမဟုတ်ချင်း စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့သွားလေသည်။ ဆရာက ကျေနပ်သော
အပြုံးတစ်ခုဖြင့် သူ့ခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွလေး ပုတ်လျှက်
ဟိုမိုတွေဘက်တွင် ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို သူတတပ်တအားပါဝင်ခဲ့သလို၊
တစ်ဖက်မှလည်း အများတကာက ဟိုမိုတွေကို နားလည်လာနိုင်အောင်
သူအားကြိုးမာန်တက်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ သူရေးသားသော သက်တန့်ဒိုင်ယာရီ ဆိုသော
ဟိုမိုလူတန်းစား စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးနှင့် HIV, AIDS ပညာပေး
စာအုပ်ကိုလည်း ဟိုမိုအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဦးဆောင်နေသူ အချို့က
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေး သည်။ ဟိုမိုတစ်ယောက်ဘဝကို အစပျိုးခဲ့သော သူ့ရဲ့
သက်တန့်ရောင်လွှမ်းသော ဘဝနောက်ခံကို ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ကာ ပညာပေးအကြောင်း
အရာများ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းရေးသားထားသဖြင့် ထိုစာအုပ်ထူထူလေးမှာ
ဟိုမိုများအကြားတွင်မကပဲ အများပြည်သူများအကြားတွင် ပါ ထိုစာအုပ်က..
သက်တန့်ရောင် အဖုံးလေးနှင့် ထိုစာအုပ်လေး၏ အဆုံးစာမျက်နှာများတွင်
Talents ofaHomo ဆိုသော ဟိုမိုများ၏ ပင်ကိုယ် ပါရမီများကို
တစ်ချက်ခြင်း ဥပမာများနှင့်တကွ အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြထားသည့်အပြင်၊
ကျောဘက်အဖုံးမှာတော့ Advantages ofaHomo ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း
ထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုခေါင်းစဉ်လေး၏ အောက်တွင်တော့
စာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ်ကိုသာ အရိုးရှင်း ဆုံးရေးသားထားလေသည်။
"ဟိုမိုဖြစ်ရခြင်း၏ အရေးသာမှုအများအပြားရှိသော်လည်း အနှစ်သာရကို
ခြုံပြောရရင်ဖြင့် ဟိုမိုတစ်ယောက်မှာ ယောက်ျား တစ်ယောက်၏စွမ်းရည်ရော၊
မိန်းမတစ်ဦးကဲ့သို့သော အမြင်ရောပြည့်ဝနေပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်ဖြင့်ပင်
လူ့လောကကြီးကို ရှုထောင့် အသစ်တစ်မျိုးကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ထိုအစွမ်းဖြင့် ဆန်းသစ်မှုများကို တီထွင်လာနိုင်ကြပါသည်။ မည်သို့သော
အကျိုးကျေးဇူးရှိ သည်ဖြစ်စေ ထိုအကျိုးကျေးဇူးကို သင့်တော်ရာတွင်
အသုံးချတတ်ကာ မိမိတို့တွင်ရှိသော ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းပါရမီတို့ကို အသုံးချ
တတ်ဖို့ အဓိကကျသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆပါသည်။
ဒီစာအုပ်လေးထွက်လာသည်ကပင် ဟိုမိုများတွင်ရှိသော တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းအားကို သက်သေပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်….။"
ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အခုဆိုလျှင် သူသည် ကြယ်စုံသော ညတစ်ညအတွက်
ကြယ်လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ မှိန်ပြီးပျောက်ကွယ် သွားပါစေဦးတော့၊
သူသည် ညကို အားပြုခဲ့သည်ကိုတော့ မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်ပါ။
အတွေးစတို့ရပ်တန့်သွားသော်လည်း ရင်ခုန်သံများက ပိုမို ပြန်ဆန်လာသလိုပင်။
အိမ်ခန်းထဲက ဝရန်တာပြတင်းပေါက်မှ ငေးမောရင်း
အတွေးတို့လွင့်ပျံနေခဲ့သဖြင့် ထုံးစံအတိုင်း သူ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို
မေ့လျှော့စွာ သတိမထားမိခဲ့တာလေ..။ ဒါပေမယ့် သူ့အနောက်မှာ
ဘယ်သူရောက်နေလည်းဆိုတာ လှည့်ကြည့်စရာ မလိုပဲ နှလုံးသားဖြင့်
သူအပြင်ကို ကြည့်နေရာမှ ရင်ခုန်စွာ အနောက်ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း
လှည့်ကြည့်လိုက်မိပါသည်…….။ သူ၏ သက်တန့် ဒိုင်ယာရီလေးကို
လင်းလက်တောက်ပအောင် မွမ်းမံပေးခဲ့သူ………..၊ သူ့ဘဝကို
ယုံကြည်မှုရှိစေခဲ့သူ……၊ သူ့အားနွေးထွေးစေ ခဲ့သူ………..၊ သူ့လက်ထဲ
တန်ဖိုးရှိသော စကားလက်ဆောင်များ ကမ်းပေးခဲ့သူ၊ သူ့ရင်ထဲက တစ်ပွင့်ထဲသော
သက်ပိုင် စာသင်ခန်းထဲဝင်သွားတာကို အခန်းပေါက်ဝမှ သူရပ်ကြည့်နေမိသည်။
ကျောင်းသားတွေအကြား ယုံကြည်မှုရှိစွာ ဝင်ရောက်သွားသော
သက်ပိုင်ကိုကြည့်ရင်း သူကြည်နူးစွာ ပြုံးမိလေသည်။ ကျောင်းသားများကလည်း
သက်ပိုင်ကို အတော်လေးပင် လေးစားချစ်ပုံပေါ်ပါသည်။ သက်ပိုင်ဝင်သွားသည်နှင့်
တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် စကားတွေလာပြောကြသည်၊ မေးမြန်ကြသည်၊
မုန့်တွေလာကျွေးကြသည်၊ စာလာမေးကြပါသည်။ သက်ပိုင်ကိုကြည့်ပြီး
သက်ပိုင်လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော စာရွက်တစ်ထပ်ကိုကြည့်ရင်း
သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပြင်ဆင်ချက်ကို ဆရာနားလည်ပါလိမ့် မည်ဟု
သူထင်မိပါသည်။ ဆရာက Advantages ofaHomo ဆိုသော Essay
ကိုရေးခိုင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူက Definition ofaRed Ribbon ဆိုသော
ခေါင်းစဉ်ဖြင့် HIV/AIDS တားဆီးကာကွယ်ရေး Essay ပြိုင်ပွဲကျင်းပရန်
သက်ပိုင်အား အကြံပေးခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲ အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
HIV/AIDS တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအတွက် လေ့လာရင်း ဗဟုသုတများ
ပြည့်စုံသွားလိမ့်မည်ဟု သူ ခိုင်မာစွာယုံကြည်သည်။ ငယ်စဉ်ထဲက
သူတို့ရင်ထဲတွင် ထိုဗဟုသုတများရှိနေခြင်းသည် HIV/AIDS
ကိုကြိ်ုတင်ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ထဲမှ ထိရောက်သော
နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ၏ ဖြစ်စေချင်သော လမ်းကြောင်း
အနည်းငယ်မှားယွင်းသွားမှုကို သူ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း
ပြင်ဆင်ချင်ခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။ သူနှစ်ခြိုက်စွာ ပြုံးနေလိုက်ပါသည်။
ဆရာ ဘယ်ဆီရောက်နေမှန်းသူမသိရသော်လည်း ဒီတစ်ခေါက် အိပ်မက်ထဲကို
ဆရာရောက်လာခဲ့လျှင်တော့ သူ့ကို ဖဲကြိုးအနီ လေးကမ်းပေးတော့မည်မဟုတ်ပဲ
သူ့အားချီးကျူးသော အပြုံးဖြင့် ခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွ
ပုတ်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ် ဖြစ်စေချင်တာများကို
ထိုအရာများသည်လည်း သူ၏ နောက်ထပ်သော သက်တန့် ဒိုင်ယာရီများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
အပြင်မှာတော့ မိုးတစ်ဖွဲဖွဲရွာနေသည်။ မိုးရွာပြီးလျှင် သက်တန့်တစ်စင်းကို
မြင်ရပါလိမ့်မည်။ အားလုံးကို လှပသော အသွင်ဖြင့် လွှမ်းခြုံထားမည်ဖြစ်သော
သက်တန့် တစ်စင်းပင်…… ဖြစ်ပါတော့သည်……….။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ ပေါင်ပေါင် ကမကထပြုတဲ့ ဟိုမိုအကျိုးပြု
၀တ္ထုတိုပြိုင်ပွဲမှ စာမူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူ့ထဲတွေပါဝင်သော စကားလုံးဖွင့်
ဆိုချက်အချို့ကို သဘောကျသောကြောင့် ကျွန်တော့် ဘလော့ခ်တွင်
Posted by Alex Aung at 7:48 PM3comments:
ခရစ်စမတ် ညနေခင်းလေးတစ်ခုက ကိုယ်ဘ၀မှာမမေ့နိုင်စရာပါပဲ။ မင်းအိမ်ကနေ
တခြားလူတွေ ပြန်သွားလျင်ပြန်သွားခြင်း ခရစ်စမတ်
လက်ဆောင်ကိုယ့်အတွက်ပေးထားတာကို ဖွင့်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တာကလည်း အလန့်တကြား။
ကိုယ်က လက်ဆောင်ထုပ်ကို မဖွင့်ချင်သေး လို့ ဟိုအကြောင်းပြ သည်အကြောင်းပြ
မဖွင့်ဘဲနေတာ မင်းစိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်။ ကိုယ်က မင်းနှင့်အတူ ရှိနေရရင်၊
ပြီးတော့ မင်း မျက်နှာလေးကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ မြင်ခွင့်ရနေရင်ပဲ
ပေးဖို့လက်ဆောင်မလိုဘူးဆိုတာ မင်းက သိပ်လက်မခံချင်ခဲ့ဘူး။
Christmas Eve Party လေးမင်းအခန်းမှာကျင်းပပြီးတဲ့အချိန် ရှင်းလင်းဖို့
နေသားတကျဖြစ်အောင် ကိုယ်ကူညီနေတုန်း အလေးအနက် တောင်းဆိုနေခဲ့တာ။
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိတော့ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကို
ကိုယ်ပြန်ကြားနေရသလိုပါပဲ။ မင်းက တခြားအခန်းမှာ ဖန်ခွက်အလွတ်တွေ၊
အစားအသောက်ထည့်ခဲ့တဲ့ ပန်းကန်ဟောင်းတွေ သိမ်းဆည်းနေတာ။ လက်ဆောင်ထုပ်က
အရွယ်အစား အလယ်အလတ်ဆိုတော့ ဘာများပါလိမ့်ပေါ့နော်။ ကိုယ်ကတော့ မင်းအတွက်
လက်ဆောင်ဆိုပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပြဖို့ တစ်စုံတစ်ခု ဟုတ်တယ် တစ်စုံ
တစ်ခုမပါလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းလိုချင်နေတဲ့ အဖြေကလေးပါလာခဲ့တယ်။
အဲဒါလေးကို ပြောပြဖို့ မင်းလိုအင်ကိုဖြည့်ဖို့ ဘယ်ဘက် ရင်အုံထဲက
'Candy Cane အရောင် condom တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တကယ်မသိဘူး'
ကိုယ်အရမ်းရယ်ချင်သွားခဲ့ရတာ။ မင်းရှိတဲ့အခန်းဘက်ကို အသံပြုလိုက်တော့လည်း
မင်းရဲ့တုန့်ပြန်ဖြေဆိုတာကို မကြားရ။ ဘာဖြစ်လို့ဘာလိမ့်ဆိုပြီး
မီးဖိုချောင်ထဲက ခပ်သွက်သွက်ခြေလှမ်း တွေနှင့် ကိုယ်မင်းဆီလာလိုက်ရတယ်။
တံခါးမကြီးကို အသာတွန်းပြီး အခန်းတွင်းလှမ်းဝင်လိုက်စဉ်မှာပဲ
မင်းပေးတဲ့လက်ဆောင်ထုပ်ကို သတိရပြီး ပြုံးမိရသေးတယ်။ ဟင်.... ရင်ထဲ
ထိတ်သွားတာပဲ အခန်းတစ်ခုလုံး မီးလင်းဖိုကလာတဲ့ မီးရောင်ကလွဲလို့
ဘာမှထွန်းမထားဘူးလေ။ မီးလင်းဖိုနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မွှေးပွကောဇောကြီး၊
ပြီးတော့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးက အရောင်တဖျက်ဖျက်။ ကော်ဇောကြီးကို
ဖွဖွနင်းပြီး လျောက်လာတာ ကိုယ်ရင် တွေ ပိုပြီးခုန် သွေးတွေနွေးစေရော
မင်းကိုမြင်ရတာ။ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းလှတဲ့ မင်းတစ်ကိုယ်လုံး ခေါင်းမှာ
Santa ဦးထုပ်တစ်လုံး၊ အနီရောင် ဖဲကြိုးကြီးတစ်ချောင်းကို
မင်းတစ်ကိုယ်လုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့မှာ စည်းထားတာရယ်၊ ပြီးတော့
မင်းတင်ပါး ခပ်အိအိထဲမှာ Candy Cane ခပ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းမြှုပ်နေတာရယ်
'ဘာလုပ်နေတာလဲ...' ကိုယ်စိတ်လည်းရှုပ် အံ့အားသင့်ပြီး
မင်းကိုမေးမြန်းဖြစ်ရပါပြီ။ 'မင်းဖင်ထဲ အဲဒါကြီးကိုဘာထည့်လုပ်နေတာလဲ'
'Christmas အတွက်မင်းဘာလိုချင်ခဲ့တယ်လို့ ငါ့ကိုပြောခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား
Alex?' မင်းကိုယ့်ဘက်လှည့်ပြီး ရီဝေေ၀ အကြည့်တွေနှင့်
ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်တာ မြင်ရသူမှာ ပိုမိုရင်ခုန်ရတယ် သိလား။
'အေး...ကိုယ့်ရင်ထဲ ခံစားနေရတာ လိုအပ်တာအကုန်လုံးပြောခဲ့တာပဲ'
ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အဖြေ မပေးခဲ့ဘူး မဟုတ်လား'
'အဲဒါ....အခုလို ခပ်မာမာ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် အာသာဖြေနေချင်ခဲ့တာလို့
'ကိုယ့်ကို စနောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလား သူရ' အရိပ်အယောင်
မချိုမချဉ်ပြုံးပြီး မေးသမျှကိုဖြေတယ် မင်းကတော့။
'အခု ငါစနောက်နေတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ မင်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဖြေအတွက်
ဘာမှဆက်မပြောဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ ကော်ဇောပေါ်လှဲလျောင်းနေတဲ့
မင်းခန္ဓာကိုယ် အနေအထားရယ်၊ ရီဝေေ၀ကြည့်နေတဲ့ မင်းမျက်လုံးတွေက ကိုယ့်ကို
သွေးတွေဆူပွက်လာစေဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ပါပေရဲ့။ တစောင်းမကျတကျ လှဲနေတဲ့
မင်းနံဘေးကို အသာဝင်လှဲ ကိုယ့်လက်နှင့် မင်းနံစောင်းကြွက်သားတွေ
တင်ပါးတွေ ကို အရေပြားခြင်း ထိကပ်ရတဲ့ ဖီလင်၊
မင်းနှုတ်ခမ်းတွေ၊လျှာဖျားတွေနှင့် ဖြူဖြူဖွေးသွားတွေကို ထိခတ်ရတဲ့အခါ
candy cane ရဲ့ ချိုမြမှု ဖီလင်တွေက သွေးကြောထဲ တစိမ့်စိမ့်ပါ။ မင်းလည်း
ကိုယ့်ရဲ့ မွတ်သိပ်တဲ့ အနမ်းတွေကြားမှာ မိန့်မူးသံလေးတွေထွက်လာတာ candy
အရသာတွေနှင့် ဖုံးလွှမ်း ထားတဲ့ ကိုယ့်လျှာဖျားက မင်းခရေပေါက်ကို
၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်မင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ကာစေ့ထားတဲ့
မင်းပေါင်ကြားကို ကြည့်လိုက်တော့ အနီရောင်ဖဲကြိုးနှင့် bow တစ်ခုက
မတ်နေတဲ့ ငပဲတ၀ိုက်ခပ်ရှုပ်ရှုပ်။ ဖဲကြိုးအစွန်းမှ ခေါင်းလောင်းသေးသေးလေး
တစ်ခုချိတ်ထားတာမြင်ရတော့ ကိုယ့်မှာရယ်မော မိရသေးရဲ့။ ငပဲကိုချည်ထားတဲ့
bow ကို ကိုယ်သွားနှင့်ကိုက်ပြီးဖြေချလိုက်တော့ ခေါင်းလောင်းသံလေးမြည်ကာ
ပြေသွားစဉ်မှာ မင်းငပဲ လဲ ကိုယ့်ရဲ့ပူနွေးတဲ့ အာခံတွင်းထဲရောက်ကရော။
မင်းရဲ့ညည်းတွားသံ ပါးစပ်က ထွက်လာသလို ခြေထောက်တွေက မွှေးပွကော်ဇောကို
ကန်ကျောက်ကာ ကိုယ့်ဆံပင်တွေကို မင်းလက်ချောင်းတွေနှင့်ဖွတော့တာပဲ။
စိတ်ထဲက ခံစားမှုတွေ ဖီလင်တွေကို အပြင်းပြဆုံး မင်း ဖော်ပြရင်း
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ ခဏတာအချိန်ပေါ့။
မီးလင်းဖိုက မီးတောက်တွေကြောင့် လင်းပနေတဲ့ မင်းမျက်နှာကို
ကိုယ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ ပျော်ရွှင်နှစ်သိမ့်မိန့်မူးမှုကအပြည့်။ မင်း
နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကိုက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် ရုတ်တရက်။ ဒါကြောင့်
ကိုယ့်ဖာသာ အပေါ်ကိုရွေ့ မင်းရင်ဘတ်မှာ စည်းနှောင်ထားတဲ့ ဖဲကြိုးနီကို
သွားနှင့်ဖယ်ရှား ခပ်မာမာဖြစ်စပြုနေတဲ့ နို့သီးခေါင်း လေးတွေကို
ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက်မိတာပေါ့။ မင်းကလည်း ခြေထောက်နှစ်ဖက်နှင့် ကိုယ့်ခါးကို
ချည်နှောင်လိုက်တာ မတ်ထောင်နေတဲ့ မင်း ငပဲက ချက်ကိုထိကရော။
နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနဲ့ကလိလိုက် ရင်အုံတွေကို
ဖျစ်ညှစ်လိုက်လုပ်ပေးတာမှာ မင်းပခုံးတွေ တဆတ်ဆတ်ခါနေသလို မင်း
တင်ပဆုံတွေကလည်း မွှေးပွကောဇောကြီးကို အပေါ်ကိုရွေ့သွားစေတယ်နော့။
မင်းငပဲကလည်း ကိုယ့်ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို စည်း ချက်ကျကျ ပွတ်သပ်လို့။
'ငါလည်းလိုချင်တယ'် 'ငါလည်း မင်းကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်မျိုးလိုချင်တယ်'
'ဘာ....' ကိုယ်မင်းနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မျှဉ်းစုပ်နေရာကနေဖယ်ပြီး
မင်းမျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျေနပ်မိန့်မူးမှုအပြည့်။ 'Christmas
အတွက်' မသဲမကွဲ တိုးတိုးမင်းပြောတာ။ '..လက်တောင်အပြင် တခြားလက်ဆောင်ကို
'တခြားလက်ဆောင်....အိုး...ဒါတွေ' ကိုယ်အခုမှပြန်တွေးမိတယ်။ ဒါကြောင့်
မီးဖိုချောင်ထဲဖွင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်ထဲက candy cane အရောင်တွေထဲ
'ဟုတ်တယ်....ဟုတ်တယ်....အခုမင်းရဲ့ candy ချောင်းကြီးကိုလိုအပ်နေတာ....အ'
မီးလင်းဖိုရဲ့ မီးရောင်ကြောင့် အလင်းသဲ့သဲ့ လင်းနေတဲ့ အခန်းထဲ
တဖျတ်ဖျတ်တောက်နေတဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးဘေးက မွှေးပွ ကော်ဇောကြီးထဲ
အ၀တ်မပါ လူသားနှစ်ယောက် လွန့်လူးကြတာပေါ့ကွာ ဟုတ်လား။မင်းပေးတဲ့ condom
ကိုတဆတ်ဆတ် သွေးတိုးပြီး ပေါင်ခြံ ကြားမှာ ခုန်နေတဲ့ ကိုယ့်ညီဘွားကို
စွပ်လိုက်တော့ မင်းခဏနေက အာသာဖြေထည့်ထားခဲ့တဲ့ candy cane ထက်
ပိုထူပိုတုတ်တဲ့ candy ချောင်းကြီးက အသင့်ဖြစ်ပြီ။
မင်းတင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် တဖတ်ဖတ်ရိုက်ရင်း ခရေပေါက်မှာ အသာတေ့ကာ
ဖိသွင်း လိုက်တော့ ညည်းတွား လိုက်တဲ့ မင်းအသံရယ်
မင်းကိုပိုမို နှစ်သက်သွားပါတယ်။ အိုး...မင်းကို
ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်သွင်းရတာလောက် ကောင်းတဲ့အရသာမရှိခဲ့ဘူး တကယ်..။
နှစ်ဦးသား မျက်နှာ တွေလည်း အရသာထူး မှာပျော်မြူးနေကြတာပေါ့။
'မင်း...ငါ့ကိုပြောတော့ ခရစ်စမတ်အတွက်ဘာမှ မလိုခဲ့ပါဘူးဆို။ အဲဒီလို မင်းခံစား....'
'ရှူး.....ရှူး...' နှုတ်ခမ်းမှာ လက်ညှိုးတင် မင်းကိုတိတ်တိတ်နေဖို့
အချက်ပြရတာက စကားပြောဖို့တောင်မလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိအချိန်လေး ရနေလို့ပါ။
မင်းလည်တိုင် နုနုညံ့ညံ့မှာ ကိုယ်အနမ်းတွေချွေ၊ မင်းတင်ပါးတွေ
ပေါင်တွင်းသားတွေကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပေးနေရတာ ကြောင့်လည်း အပါအ၀င်ပေါ့။
'ကိုယ် စကားမဆိုခဲ့ဘူးနော်။ ခရစ်စမတ်အတွက် မင်းကိုပဲလိုအပ်ခဲ့တာပါ။ you
are all of the Christmas that I needed'
'အဲဒီစကားထက် ချိုမြိန်တာရှိဦးမလားဟင်...' မင်းအိပ်မက်ထဲမှာ
'ငါသိနေတာကတော့ လောလောဆယ် မင်းအပြုအစုတွေက
မင်းလိုအင်တွေထဲ ကိုယ်မျောပါမှာပါ။ ကိုယ်မငြင်းနိုင်ပါဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ဦး လိုအပ်ချက်၊ လိုအပ်နေမှုတွေက မတူညီကြသလိုပဲနော်။
ကိုယ်ရှက်ပြီးလက်တွန့်သွားရတယ်။ 'ကိုယ်တောင်းပန် ပါတယ်၊ မင်းအတွက်
ကိုယ့်စကားကြာတော့ မင်းရယ်သွမ်းသွေးတယ်။ 'မင်း...ငါ့အတွက် လက်ဆောင်အဖြစ်
ကိုယ်မင်းပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲ Candy Cane ကြီးကို
အတွင်းကျအဆုံးထိသွင်းကာ မင်းလိုခင်နေတဲ့ လက်ဆောင်ကို ကော်ဇောကြီး ပိုမို
တွန့်ခေါက် သွားတဲ့အထိပေးပစ်တာပေါ့ကွာ ဒီတော့လည်း။ မင်းခါးစပ်တ၀ိုက်မှာ
ချည်နှောင်ထေားတဲ့ ဖဲကြိုးအစွန်းက ခေါင်းလောင်းသံ လေးက မင်းရယ်သံ၊
သက်ပြင်း ချသံနှင့် အော်ဟစ်ညည်းတွားသံတွေက ဟာမိုနီကိုဖြစ်လို့နော်။
*Alex Aung (16-12-2010)*
Posted by Alex Aung at 7:11 PM No comments:
အစွမ်းထက်သော AIDS ကာကွယ်ဆေးတွေ့ရ
AIDS ရောဂါကို ကူးဆက်ခံနေရတဲ့ ဝေဒနာသည်တွေနဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့ လုပ်အားပေးသူများကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆေးကို ပထမဦးဆုံး တွေ့ခဲ့ပါပြီ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စမ်းသပ်ချက် အများအပြားအရ ဆေးထိုးခြင်းမှ ကူးဆက်ခြင်းကို ၃၁.၂% အောက်အထိ လျှော့ချနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်က ထောက်ပံ့ပြီး လုပ်အားပေးသူ ၁၆၄၀၂ ယောက်အပေါ် လေ့လာခဲ့တဲ့ ဤတွေ့ရှိချက် တွေဟာ HIV/AIDS အတွက် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့ ၆ နှစ်ကြာ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေဟာ HIV/AIDS ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Witthaya Kaewparadai က ဘန်ကောင်မြို့တွင် ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဤရောဂါ စတင်ဖြစ်ပေါ်သော ၁၉၈၀ ပြည်နှစ်တွေက စပြီး ကုသခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ် ကာကွယ်ခြင်းများမှာ တိုးတက်မှုတွေ ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ယခုအထိတော့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်တဲ့ဆေး မတွေ့သေးပါ။
AIDS ကူးဆက်ခြင်း လုံးဝမရှိနိုင်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း အလေ့အထရှိသော စေတနာ့ ၀န်ထမ်းအားလုံး အနက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း တစ်ဝက်လောက်ကို ပထမနေနဲ့ placebo ဆေးကို ပေးကြည့်ပါတယ်။ ဒုတိယ အနေနဲ့လည်း Alvac နဲ့ AidsVax ဆေးကို ထိုးပေးကြည်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆေး နှစ်မျိုးလုံးဟာ သူတို့တစ်မျိုးတည်း အခြေအနေမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ Sanofi-Pasteurရဲ့ Alvax ဆေးဟာ ကျောက်ရောဂါကာ ကွယ်ဆေးဖြစ်ပြီး HIV မျိုးစေ့ထဲကို ခိုးဝင်ရောက်သွားပြီး ရောဂါ ကာကွယ်တဲ့ T-cells ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကူစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ AidsVax ကတော့ proteins ဆဲ(လ်) စု ပါဝင်ပြီး HIV cells တွေကို ခုခံပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါကာကွယ်တဲ့ ပဋိပစ္စည်း (ကိုယ်ခံအားစနစ်) Antibody ကို နိုးဆွ ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က ရောဂါကူးစက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကို ထိုးပေးခဲ့သော Merck စမ်းသပ်ချက်တွင် အသုံးပြုသည့် Ad5 ကာကွယ်ဆေးကို ပြန်လည် လေ့လာချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် တွေ့ရှိရသော ရလဒ်သည် လုံးဝ မျှော်လင့်ထားခြင်း မရှိသော အကျိုးရလဒ်များကို တွေ့ရှိရတယ်လို့ သုတေသန ပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။ ထိုတွေ့ရှိချက်မှာတော့ ယင်းကာကွယ်ဆေးဟာ ကိုခံအားစနစ်နှစ်ဆ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလိုတွေ့ရှိချက်ဟာ စမ်းသက်မှု ပြုလုပ်သောသူနှင့် စမ်းသပ်ခံသော သူများအတွက် မဟာအောင်မြင်မှု ဖြစ်ပါတယ်လို့ စမ်းသပ်မှုကို ပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုများအကြား ထောက်ခံသူများက ဆိုပါတယ်။
"အခုလို ကာကွယ်နိုင်မှု အရမ်းကောင်းပြီး ထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော် လုံးဝ မထင်ခဲ့ပါဘူး" ဟု အမေရိကန် အမျိုးသား ကူးဆက်ရောဂါနှင့် ဆေးဝါး ထိရောက်မှု တိုင်းတာရေးဌာနကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့သူ Anthony Fauci က ဒါရိုက်တာ သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
Alvac နဲ့ AidsVax ဒီကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုးကို စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများကို ၆ လကြာ ထိုးပေးခဲ့ပြီး ၃ နှစ်ကြာကာလအထိ ဆောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ကို လုံခြုံစိတ်ချသော လိင်ဆက်ဆံရေးအတွက် လမ်းညွန်မှုများပေးခဲ့ပြီး ထိုဆေးကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ တန်ပြန် တုန့်ပြန်မှု မတွေရခဲ့ကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားထားပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:19 AM No comments: